09/21/13 ~ Myanmar Forward
Search Engine မှာ ကိုယ့်ဆိုဒ် ထိပ်ဆုံးပေါ်အောင် လုပ်မယ် (SEO)
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under နည်းပညာ | No comments
SEO လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရင် လူသိပ်မသိမှာစိုးလို့ လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားနိုင်အောင် Search Engine မှာ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ထိပ်ဆုံးပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြောမယ့် အကြောင်းအရာကတော ကိုယ့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို SEO ကောင်းကောင်းနဲ့ အမြဲ လူရှာလွယ်အောင် လုပ်နေဖို့ပဲ။ အဲ့လို ထိပ်ရောက်မှ ကိုယ့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို လူကြည့်များစေ၊ လူအဝင်အထွက် များစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Search Engine မှာ အမြဲထိပ်ရောက်စေမယ့် နည်းလမ်းကို မျှဝေ ပေးပါ့မယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်လုပ်မလုပ်လုပ် Search Engine ကလုပ်တဲ့ အလုပ် ၅ ခုက ဒီလိုရှိပါတယ်။
Words Matter . Tittle Matter . Links Matters . Words in Links . Reputation
အဲ့အလုပ်ငါးခုကို Google ရဲ့  Algorithm မှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က စကားလုံး တစ်ခုခုနဲ့ ရှာဖွေပြီဆိုရင် Google ရဲ့  ရှာဖွေပုံ အဆင့်ဆင့် (Algorithm) က အထပ်ပါ အတိုင်း သွားပါတယ်။
ခုနေ Search Engine မှာ Myanmar လို့ ရိုက်လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ မြန်မာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ် ဝဘ်ဆိုဒ်များ အကြိမ်အရေအတွက် များများ အသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာကို ရှာပါမယ်။ အဲ။ M အကြီးလား m အသေးလား ဆိုပြီးတော့တောင် ကွဲပါသေးတယ်။
ခေါင်းစဉ်ပေါ့။ Web Page တစ်ခုရဲ့  ခေါင်းစဉ်၊ စာပုဒ်တစ်ခုရဲ့  ခေါင်းစဉ် - Title ကို html format ကနေ Google ရဲ့  Spider က ဝင်ဖတ်သွားတာပါ။ ဒီတော့ စာလုံး အရွယ်အစား ဘယ်လောက်နဲ့ ရေးတာက အစ သေချာလိုက်မှတ်တယ်။ ဒီတော့ ခေါင်းစဉ်မှာ ကိုယ်ရှာဖွေတဲ့ စကားလုံးကို သေသေချာချာ ဖော်ပြထားမှု ရှိမရှိကို သေချာစစ်တယ်။ ဥပမာ ရှာနေတာက Myanmar ဆိုရင် Myanmar လို့ သီးသန့်ရေးထားတဲ့စာကို ဦးစာပေး စီထားပေးပြီး Myanmar’s , myanmar တို့ကိုအနောက်မှာ ဆီပေးတယ်။
လခ့်လေးတွေပေါ့။ ဆိုဒ်အတော်များများက ယင်းဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်ဆီကို ညွန်ပြတဲ့ လခ့်အရမ်းများနေရင် Search Engine က ဒါဟာ အကောင်းဆုံး၊ အမှန်ကန်ဆုံး၊ အသေချာနိုင်ဆုံး အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ယင်း URL ကိုဖော်ပြတယ်။
ဥပမာ book ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဝဘ်ဆိုဒ်မှာရေးတဲ့သူက Amazon.com ကို Link ထိုးပေးထားရင် ကလစ်နှိပ်တဲ့အခါ amazon ကိုရောက်သွားတယ်။ အဲဒါတွေအရမ်းများတော့ နောက်ဆိုရင် Book လို့ Amazon.com ကိုအရောက်သွားစေပါတယ်။
အကြိမ်အရေအတွက်ပေါ့။ လူအကြည့်များ၊ အရှာများလို့၊ ကလစ်အနှိပ်များတဲ့ URL /Web Page ကို Search Engine က ဦးစားပေးဖော်ပြပါတယ်။ Visit လုပ်တဲ့၊ time spend လုပ်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် များလေလေ Search Engine က ဦးစားပေးဖော်ပြလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုကေ အထပ်ပါ ရှင်းပြတဲ့အချက်တွေက Search Engine အပိုင်းမှာ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာပဲ ရှိသေးသတယ်။ ဒီတော့ Search Engine မှာ ကိုယ့် ဆိုဒ်လေး ထိပ်ဆုံးအမြဲ ရောက်အောင် SEO အမြင့်ဆုံး ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ အောက်မှာ လာပါတော့မယ်။
ခေါင်းစဉ်ကြီးအားဖြင့် Content, HTML, Architecture, Links, Trust, Social, Personal ဆိုပြီး ခွဲထားခြင်းပါသေးတယ်။
Quality - ကိုယ်ဖန်တီးရေးသားလိုက်တဲ့စာ (Content) က အရည်အသွေး ကောင်းမွန်နေရမယ်။ အရေးအသား ပြောင်မြောက်ဖို့လိုတာကိုပြောတာပါ။
Research - သုတေသန လုပ်ဖုိ့အချိန်ပေး။ ပုလင်းကြီးတွေနဲ့ မျက်မှန်တပ်လုပ်ဖို့ပြောတမဟုတ်ဘူး။ လူတွေက Search Engine မှာ ဘယ် Keyword ကိုအရှာများလဲ။ ဒီတော့ ငါ့ရဲ့  စာထဲမှာ လူရှာများတဲ့ ဘယ်လို စာလုံးကို ထည့်ရေးရမလဲ စဉ်းစားရတော့မယ်။ အဲ့ဒီမှာကွာတာပါ။ သာမန်စာရေးဆရာတစ်ယောက်နဲ့ SEO စာရေးဆရာ တစ်ယောက်က ဒီမှာစပြီးတော့ စကေးကွာသွားပြီ။ ဆက်ကြအုံးစို့။
Words – Research လုပ်ပြီး ရတဲ့အဖြေကို ဒီမှာထည့်သုံးရမယ်လေ။ ဒီတော့ သိပ်မပြောတော့ပါဘူး။ ဘယ်လို စကားစုသုံးရမယ်။ စာသုံးရမယ် ဘာညာပေါ့။
Engage – User Engage ဖြစ်ဖို့ပေါ့။ ကိုယ့်စာကို ခေါင်းစဉ်လေးပဲ ဖတ်ပြီး ဒိုးသွားပြီဆိုရင် ဒါ Engage မဖြစ်လို့၊ ဆိုဒ်ကို Visitor တော့ ဝင်သွားမယ်။ သို့ပေမယ့် ၃ စက္ကန့်တောင်မကြာလိုက်ဘူးဆိုရင် Count သာများသွားမယ်။ ဆိုဒ်က တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ Engage ဖြစ်ဖို့ Content မှာ အိုင်ဒီယာ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးသား နိုင်ရမယ်။
Thin - ကိုယ်က စာတော့ ရေးနေပြီ။ ရှယ်ကိုရေးပစ်တာ။ သို့ပေမယ့် Search Engine က ရှာဖို့အတွက် ဘယ်စာလုံး ဆွဲထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာကျ မသိတော့ဘူး။ ကိုယ့်အသုံးအနှုန်းတွေက အရမ်းထူးခြားနေမယ်။ ရှာမယ့်သူက အဲဒါတွေ ခေါင်းစားမခံပဲ အလွယ်စကားလုံးနဲ့ရှာတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်စာက ဘောင်ကျင်းလေးထဲမှာ ရှိနေလို့ မရတော့ဘူး။
Ads – Content မှာ ကြော်ငြာတာ သိပ်မပါဖို့လိုပါတယ်။ မဖြစ်မနေပါရင်တောင် Relevant ဖြစ်မယ့် သတင်းအချက် အလက်ကို ဦးစားပေးဖော်ပြနိုင်ရမယ်။ စာတစ်ပုဒ်လုံးက ကြော်ငြာတွေချည်း၊ Link တွေချည်း ချိန်ထိုးထားရင် ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူး။
Title –Web Page တွေမှာ ထားရမယ့် Title က သီးသန့်ဆီ ရှိရပါမယ်။ ဘယ် အမျိုးအစားလည်း ဆိုတာကို ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြားထားဖို့ပေါ့။ ဥပမာ နည်းပညာ ဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် Page Title ကို Technology လို့ ပေးထားတဲ့အခါ Google က ယင်း Title ပါတဲ့ စာမျက်နှာကို ဦးစားပေးပြီး ဆွဲပေး ပါတယ်။
Description – Meta data Description ပေါ့။ စာပိုဒ်ထဲကနေ ဘယ်စာလေးတွေကို ပိုအမြင်များစေချင်လဲ ဖန်တီးသူဘက်ကို Search Engine က အခွင့်အရေးရေးပေးထားပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်က မဖြည့်ရင် Google က ဒီအဆင့်ကိုကျော်ပြီး အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ ဒီတော့ ထည့်တဲ့ဆိုဒ်များက ဘယ်ချိန်ရှာရှာ ထိပ်ဆုံး ရောက်သွားရတာပေ့ါ။ ဒါကိုသေသေချာချာ ရေးထည့်ပေးဖုိ့လိုပါတယ်။
Header - စာပိုဒ်နဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး ဆီလျော်လျောက်ပတ်တဲ့ ခေါင်စဉ်မျိုးကို ပေးနိုင်ရမယ်။ Google က Header ကိုလည်း စာအုပ်အဖုံးလို သဘောထားပြီး အသေအချာဆွဲတာ။ ကိုယ်ပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်က စာပိုဒ်နဲ့ သင့်လျော်အောင် မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် Search Engine မှာရှာလည်း ရှာတွေ့ဖို့ ခဲသွားပါမယ်။
Structure - စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များဆိုတော့ လူတွေက ဘယ်လိုလဲလို့ မေးတော့မယ်။ Search Engine က ရှာလိုက်တဲ့အခါ List နဲ့ဖော်ပြဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့  Data တည်ဆောက်ထားပုံက စနစ်တကျ ရှိရမယ်။ အဲဒါ Developer တို့လုပ်ရမယ့် အပိုင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အလွယ်ရှင်းပြရရင် တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာလိုက်တာနဲ့ အဲဒါနဲ့ ပက်သက်တဲ့ Preview, Authorship, Publisher အားလုံး ပါဝင်နေစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ html code မှာ edit လုပ်ရမယ့် အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Hidden – Search Engine က html index တွေကိုစုတာ။ ဒီမှာ အရောင်တွေ၊ ဒီဇိုင်းတွေက ဖုံးနေတော့ သူရှာနေတဲ့ စာသားကို သေချာချမပြနိုင်ရင် SEO ကောင်းဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လည်း Web Design ပိုင်းမှာလည်း SEO နဲ့ ပက်သက်တာတွေ ရှိလာပါတယ်။
Crawl – Search Engine က လွတ်လိုက်တဲ့ Spider က ကိုယ့် ဆိုဒ်ကို အလွယ်တကူ ဝင် Crawl နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကလည်း နည်းပညာ အပိုင်း လိုအပ်ချက်ပါ။
Speed - ဒါကလည်း Hosting, Server အပိုင်းပါသွားပါပြီ။ ဆိုဒ်ရဲ့  Loading Speed မြန်ဖို့ လိုပါတယ်။
URL – URL ပေးတဲ့အခါ ထိထိမိမိ စကားလုံး၊ တိုတိုနဲ့ ပေးနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
Mobile - မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါ လွယ်ကူမြန်ဆန်ဖို့လည်း လိုအပ် ပါသေးတယ်။
Quliaty - ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို လာချိတ်ပေးသမျှ အခြာဆိုဒ်တွေကလည်း ကွာလတီကောင်းတဲ့ဆိုဒ်တွေ ဖြစ်ရမယ်။
Text – Link ကတော့ချိတ်ပေးလိုက်ပြီ။ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် text တွေကို Point လုပ်ပေးနိုင်ရပါမယ်။
Number – Link အရေအတွက် များလေလေ Search Engine က ဦးစားပေးလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
Paid - ကိုယ့်ဆိုဒ် အတွက် Link ရောက်အောင် ငွေပေးပြီး ကြော်ငြာ Link ချိတ်တာမျိုးလည်း ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။
Spam – Spam ဆိုလို့မလိုတာတွေ ကြဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဆိုဒ် Link တွေကို Forum, blog နဲ့အခြားနေရာတွေဆီကို အရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Authority - ကိုယ့်ဆိုဒ်ကော၊ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ရှဲပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက Trusted Authority ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။
အဓိက ပြောရမယ့် ခေါင်းစဉ်ငယ်တစ်ခုပါ။ လက်ရှိမှာ Facebook ဟာ ဝဘ်ဆိုဒ်တိုင်းအတွက် အားကိုးလို့ အရဆုံး Social Network နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဆိုဒ်အတွက် ကြော်ငြာဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ Share and Reputation လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံအတွက်ရည်ရါယ်လည်း၊ ဘယ်အချိန်ရှာရှာပြန်ရနိုင်မလဲ၊ ဘယ်ဒေသလဲ။ ဘယ်ဆိုရှယ်ကို ဦးတည်သလဲ အစရှိသဖြင့် ခွဲခြားဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
SEO content ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အနေအထားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် လူတိုင်း ဒီအခြေခံချက်တွေကိုသိထားရင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကော၊ မြန်မာလိုကော ရေးတတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ SEO ကောင်းကောင်းများ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ရေးသားမျှဝေ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
အောင်ခမ်း ( TSJ Team)
အာဖဂန် လွှတ်တော်အမတ် တာလီဘန်ဘက် ခိုလှုံ
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အာဖဂန် လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်းနှင့် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ အဒူဟိုင်းသည် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဆာအီပို ပြည်နယ်တွင်းရှိ တာလီဘန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံသို့ ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံသွားကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဒူဟိုင်းသည် အာဖဂန် လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဆာအီပို ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖြစ်လည်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ယင်းခိုလှုံမှုသည် အာဖဂန်အရပ်သား အရာရှိများထဲမှ အဆင့်အမြင့်ဆုံး အရာရှိတစ်ဦး တာလီဘန်ဘက်သို့ ဘက်ပြောင်းမှု ဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အာဖဂန်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ဆုတ်ခွာရန် ပြင်ဆင်နေချိန်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် အဒူဟိုင်း၏ ဘက်ပြောင်းမှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
မည်သည့် အတွက်ကြောင့် အဒူဟိုင်း ဘက်ပြောင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးသော်လည်း ၎င်း၏ ခိုလှုံမှုကို အာဖဂန် အရာရှိများက လျှော့ချ ပြောကြားသွားပြီး အဒူဟိုင်း၏ သြဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးမှုမှာလည်း ပြောပလောက်အောင် မရှိကြောင်း မှတ်ချက်ပြုသည်။
“သူဘက်ပြောင်းသွား တဲ့အတွက် ပြည်နယ်တွင်းက လူတွေအပေါ် ဘယ်လိုမှ သက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ သြဇာကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဆာအီပိုပြည်နယ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒတ်တေယာက ပြောကြားသည်။
အဒူဟိုင်း ဘက်ပြောင်း ခိုလှုံမှုကို တာလီဘန်များက ချီးကျူး ပြောကြားလိုက်ပြီး မိမိတို့အတွက် အောင်ပွဲတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်တွင်း မိမိတို့ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် ဘက်ပြောင်းမှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တာလီဘန် အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်။
တာလီဘန် အွန်လိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အဒူဟိုင်း၏ ဗီဒီယို ပေါ်ထွက်လာပြီး မိမိသည် မူဂျာဟစ်ဒင် တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ ကဘူးမြို့တော်တွင်း လေးနှစ်တာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရာတွင် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားနေသည့် အစိုးရ အဖွဲ့ကိုသာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း အဒူဟိုင်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့သော ထုတ်ပြန်ချက်များကို အသုံးပြုပြီး တာလီဘန်အဖွဲ့၏ ဝါဒဖြန့်ချိရေး တိုးမြှင့်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနိုင်ကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တာလီဘန်များ အာဏာရနေစဉ် အချိန်မှစ၍ အဒူဟိုင်းနှင့် အဆက်အသွယ် ရှိကြောင်း ဆာဆီပို ပြည်နယ်တွင်း အဒူဟိုင်း သြဇာလွှမ်းမိုးသော ကျေးရွာ ၂၀ မှ ၃၀ ခန့်ထိ ရှိကြောင်း အဒူဟိုင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိသူ လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း အဒူခါဘာက မှတ်ချက်ပြုသည်။
တာလီဘန်တို့က အဒူဟိုင်း သြဇာကို အသုံးချပြီး အဆိုပါဒေသများအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်မှုများကို နှောင့်ယှက်နိုင်ကြောင်း ၎င်းကသတိပေးသည်။
ဆာအီပိုပြည်နယ်သည် အာဖဂန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ တောင်တန်း ထူထပ်သော ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တာလီဘန် တပ်ဖွဲ့ဝင် လှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ်သာ ရှိခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း ဆာအီပိုဒေသ၌ တာလီဘန်အဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်မှုများ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း တာလီဘန်ဘက်သို့ ဘက်ပြောင်းခိုလှုံမှု အမြောက်အမြား ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့တပ်မှူးနှင့် အရာရှိငယ် ၁၃ ဦးနှင့် ရဲတပ်သား ၁၁ ဦး ဘက်ပြောင်းခိုလှုံမှု စသည့်ဖြစ်ရပ်များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကျွန်းစုမြို့၌ ဦးခေါင်းခွံနှင့် မျက်လုံးပေါက်မပါရှိသော ကလေးငယ်တစ်ဦး မွေးဖွား
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မြိတ် စက်တင်ဘာ ၂၁
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ သဇင်လမ်းနေ ဦးကျော်စွာမင်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ မသူဇာဝင်း (၂၇)နှစ်၊ (ဘ) ဦးမြင့်အေး၊ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သူသည် စက်တင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့ ည (၉း၄၈)နာရီအချိန်ခန့်တွင် နေအိမ်၌ အရပ်လက်သည်ဖြင့် သမီးမိန်းကလေးတစ်ဦးမွေးဖွားခဲ့ရာ အဆိုပါကလေးငယ်တွင် ခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံစွာပါရှိသော်လည်း ဦးခေါင်းငယ်ထိပ် ဦးခေါင်းခွံမပါရှိဘဲ မျက်စိပေါက်အရာသာ ပါရှိကြောင်း၊ကလေးငယ်၏ နှာခေါင်းမှာလည်း ပီပြင်စွာမပါရှိဘဲ ပါးစပ်ပေါက်နှင့် တဆက်တည်းဖြစ်လျှက် နှုတ်ခမ်းကွဲနေကာ မွေးဖွားလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းမိခင်နှင့်ကလေးအား ထိုနေ့ည (၁၀း၃၀)နာရီအချိန်ခန့်တွင် နေအိမ်မှ ကျွန်းစုမြို့နယ် ပြည့်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ခဲ့ရာ ကလေးငယ်အား စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့အထိ အောက်စီဂျင် ပေးထား၍ အသက်ရှင်လျှက်ရှိပြီး ကျွန်းစုမြို့နယ် ဒေသခံပြည်သူများမှ ၄င်းကလေးငယ်အား လာရောက်ကြည့်ရှုလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အတွင်းမှ လူမနေသည့် တိုက်ခန်းများအမည်ဖြင့် မဲပေါက် နေသည့်ကိစ္စကို လွှတ်တော်တွင် မေးမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံ မြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊အမှတ် (၉၄) ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့ တော်၌ (CDMA-800) တန်ဖိုး နည်းဖုန်းများသည် လူမနေသည့် တိုက်ခန်းများအမည်ဖြင့် မဲပေါက် နေသည့်ကိစ္စကို လာမည့်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအဖြစ် မေး သွားမည်ဟု သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ပြောသည်။
““သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက အရွေး အကောက်ခံရပြီးရင် သက်ဆိုင် ရာ မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့လူထုကိစ္စတာဝန် တွေကို လုပ်ပေးရမယ်”” ဟု ၎င်း ကပြောသည်။
““ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ပေး နေတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အကန့်အသတ်ရှိပေမဲ့ ဒဂုံဆိပ် ကမ်းမှာ ဘာပြောပြောကျွန်တော် တို့ပါတီရုံးခွဲဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက် ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်းကလူထုရဲ့အခက်အခဲ တွေကို ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေး နိုင်တာပါ။ အဲဒီတော့ သမ္မတကြီး ပြောနေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အောက်ခြေကိုရောက်လား၊မရောက် ဘူးလားဆိုတာ တကယ်မြို့နယ် တွေ၊ ရပ်ကွက်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ လူထုပြဿနာတွေကနေအဆုံး အဖြတ်ပေးမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ပါတီအနေနဲ့ရော၊ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ရော၊ ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ရော တင်ပြထားတဲ့လူထုအခက်အခဲကို ကျွန်တော်မှတ်ထားမှာပါ။ ဖုန်း ကိစ္စက (၅) လ၊ (၆) လကြာပြီ။ အရေးမယူဘူး။ ဒါကြောင့် လွှတ်တော်မှာကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း မေးပေးပါမယ်။ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့ဟာ ကတော့အခုဥပဒေအရကိုသူ့ကို ဖြုတ်နိုင်တယ်။ တာဝန်ကရပ်နိုင် တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ဥပဒေနည်း လမ်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်”” ဟု သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်း ညွန့်က ထပ်မံပြောသည်။
"မွတ်ဆလင်ကုလား၏ ကြံရည်တစ်ခွက်ကြောင့် ဘဝပျက်လုနီးပါးဖြစ်နေသည့် ဗမာမိန်းကလေး" (သို့မဟုတ်) “သတိထားရမည့် မွတ်ဆလင်တို့၏ အစားအသောက်များ”
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under ဗဟုသုတ | 1 comment
ကျန်ခဲ့တဲ့ (၂)ရက်ခန့်က စာရေးသူထံသို့ ဒကာမနှစ်ယောက်နှင့် ဒကာနှစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ စာရေး သူအား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပြီး ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပြောရင်းက ထို ဒကာ ဒကာမတို့ ရုံးမှာ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ ဖြစ်ရပ် က အတော့်ကို ဆိုးဝါးနေပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ မိန်းကလေးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ။ မွတ်ဆလင် ကုလားတွေရဲ့ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိသူမို့ မွတ်ဆလင်ကုလားများအား ရွံမုန်းနေသူ တစ်ယောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် အမှတ်မထင် မွတ်ဆလင်ကုလားတစ်ဦးနှင့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူငယ် ချင်းဖြစ် သည့် အလျှောက် တစ်နေ့မှာ မွတ်ဆလင်ကုလားက ထိုမိန်းကလေးအား ကြံရည်တစ်ခွက် တိုက် သည်ဟု သိရပါတယ်။ အဲဒီကြံရည်သောက်ပြီးတည်းက အဲဒီမိန်းကလေးဟာ မွတ်ဆလင်ကုလားရဲ့ လှည့်ကွက် ထဲကိုရောက် သွားတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ မွတ်ဆလင်ကုလားကို စွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်သွားတဲ့ အထိ ဖြစ်နေပါပြီ။ မိန်းကလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများက ဝိုင်းဝန်းနားချသော်လည်း မွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ ယုတ်မာမှုကို သူကိုယ်တိုင်သိနေပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူက အဲဒီမွတ်ဆလင်ကုလားကို ဘယ်လိုမှ ဖြတ်လို့ မရဘူးတဲ့။ အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေက ခါးခါးသီးသီးဆုံးမသောကြောင့် မျက်ရည်များပင် ကျသည်ဟု သိရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်ကုလားရဲ့ယုတ်မာတဲ့ အကြံနဲ့တိုက်တဲ့ ကြံရည်တစ်ခွက်ကို ယုံကြည် လွယ်စွာ သောက်မိခဲ့လေသောကြောင့် ထိုမွတ်ဆလင်ကုလားကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဖြတ်လို့မရတဲ့ အထိ ဖြစ်နေ ပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ မိဘတွေ အစ်ကိုတွေ မောင်တွေက ကြိမ်းမောင်းပါသော်လည်း ဘယ်လို မှဖြတ်မရ တဲ့ အထိကို ဖြစ်နေပါတယ်။ စာရေးသူ အတော့်ကို စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။ ထိုမိန်းကလေးနဲ့ တွေ့ဖို့အ တွက်လည်း ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်များကို ထောက်ဆကြည့်ရင် စာရေးသူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား မွတ်ဆလင်ကုလားတွေ ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်များ ကိုဈေး မဝယ်စေခြင်း၊ မွတ်ဆလင်ကုလားများနှင့်အပေါင်းအသင်းမလုပ်စေခြင်း၊ မွတ်ဆလင် ကုလား များနှင့် အိမ်ထောင်မပြုစေခြင်းများကို တိုက်တွန်းနေခြင်းဟာ ဒီလိုဆိုကျိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့မှာ စိုးသောကြောင့်ရယ်၊ သူတို့ဘာသာကိုအားပေးသလိုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကို ချိုးနှိမ် ရာရောက်သောကြောင့်ရယ်၊ သူတို့စီးပွားရေးကိုအားပေးသလိုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးကို အားနည်းအောင် လုပ်သလိုရယ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ဈေးဝယ်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ဘာသာကိုဖျက်စီးနိုင်ဖို့ အားပေးရာရောက်သလို၊ မကောင်းတဲ့ ဆေးဝါးများထည့်သွင်းထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးမိပါလျှင် အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးလို အဖြစ်မျိုး ကြုံတွေ့မည် သာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ လုံးဝ အားမပေးကြပါနဲ့။ သူတို့နဲ့ ဘာကြောင့် အပေါင်း အသင်း မလုပ်စေ ချင်တာလည်းဆိုတဲ့ အချက်ကလည်း ရှင်းနေပါတယ်။ အထက်က မိန်းကလေးဟာ သူတို့ဘာ သာဝင်နဲ့သာ အကယ်၍ အပေါင်းအသင်း မလုပ်မိပါက ထိုအဖြစ်မျိုး ကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပေ။ အခုတော့ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်နဲ့ အပေါင်းအသင်း ဖြစ်လေသောကြောင့် ရင်းနှီးမှုအရ မွတ်ဆလင်ကုလားရဲ့ ကြံရည်တစ်ခွက်ကို ယုံကြည်လွယ်စွာ သောက်သုံးမိလေသောကြောင့် မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးကို ကြုံတွေ့နေရပါပြီ။ သူတို့ဘာသာဝင်နဲ့ ရင်းနှီးပြီဆိုလျှင် ရာခိုင်နှုန်း ၇၅ သူတို့လက်ထဲရောက်မည်သာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်မပြုစေခြင်းကတော့ အဓိကရှောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘာသာဝင်နဲ့ လက်ထပ်မိပါလျှင် မရခင်က မင်းလည်းမင်းကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုးကွယ် ငါလည်းငါကြိုက်တဲ့ ဘာသာကိုးကွယ်မယ်ဟု လျာအရိုးမရှိတိုင်း မရှက်ကင်းမဲ့စွာ မုသာကိုရေလိုသုံး စကောလောက်မှ စောက်မနက်တဲ့ အကြံဆိုးနှင့် သွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီး ယုံကြည်လာအောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့ပေမယ့် ရပြီးရင်တော့ အသေခံမလား၊ ဘာသာပြောင်းမလားဆိုပြီး ဓားမိုးကာ အတင်းအဓမ္မဘာသာပြောင်း ခိုင်းခဲ့တာတွေဟာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မိန်းကလေးကို သခန်းစာယူပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာမိန်းကလေးများ မွတ်ဆလင်ကုလားများနှင့် အပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ထိုမှတဖန် သူတို့ကျွေးတဲ့ သူတို့တိုက်တဲ့ အစားအသောက်များကိုလည်း မစားကြ၊ မသောက်ကြပါနဲ့လို့ ထပ်မံ၍ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့် အထက်က မိန်းကလေးရဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ။ ထိုမိန်းကလေးလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးမကြုံတွေရလေအောင်
မွတ်ဆလင်များနှင့် အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်း အဖြစ် မပေါင်းသင်းကြပါနဲ့။
မွတ်ဆလင်ကုလားများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်း စီးပွားရေး လူမှုရေး အိမ်ထောင်ရေးကို စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် ရောင်းဝယ် ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်း နေထိုင်ကြဟု အနူးအညွတ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
စာဖတ်သူအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီး မိမိအကျိုး သူတစ်ပါးအကျိုး လောကအကျိုး သာသနာ့အကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီး ဆောင်ရွတ်နိုင်ကြပါစေ။
"... လူပြောများနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ဆီဒိုးနား စုံစမ်းစစ်ဆေးနေ ..."
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | 1 comment
Facebook နှင့် အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် ဟိုတယ်ခန်းတခုအတွင်း၌ လျှို့ဝှက်ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယို ဖိုင်များ ပျံ့နှံ့ သွားပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့၏ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်ကြီးတခုတွင် ဌာနတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဖြူအမဲဖြင့် ရိုတ်ကူးထားသော မှုန်ဝါးဝါး ဗီဒီယိုဖိုင်များသည် အွန်လိုင်း ဘလော့ဂ်များနှင့် လူမှု ကွန် ရက်များ ပေါ်သို့ ကြာသပတေးနေ့တွင် ရောက်လာခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုထဲတွင် ရမ္မက်ထန်နေသော စုံတွဲတတွဲကို ဟိုတယ်ခန်း တခုထဲ၌ မြင်တွေ့ ကြရသည်။
ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ ကြသည်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် မျှဝေသူ များပြားခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း မီဒီယာများကလည်း သတင်းအဖြစ်ရေးသား တင်ပြခဲ့ ကြသည်။ ထိုနည်းတူပင် ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုကြသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖောက်ဖျက်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်း အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ဟိုတယ်၏ မည်သည့် အခန်းတွင် အဆိုပါ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ကို ဟိုတယ် တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးစုံစမ်း နေကြသည်ဟု ရန်ကုန် ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်၏ ဧည့်ကြိုဌာန ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“ဒီ ဗီဒီယို ဖိုင်တွေကို ကျမတို့ ဟိုတယ်မှာ ရိုတ်ကူးခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်း စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ပြည်သူကို အသိပေး နိုင်ဖို့ အတွက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတခုကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်” ဟု အဆိုပါ ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးက ဆိုသည်။
သူ့အနေဖြင့် သတင်းထောက်များနှင့် ပြောဆိုခွင့်မရှိ၍ အမည်ကို ဖော်ပြခြင်း မပြုရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
ဟိုတယ်တွင် ကြာသပတေးနေ့က အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သူကပြောသည်။ ဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှု အခြေအနေမှာလည်း ပုံမှန် အတိုင်းပင် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူက ထပ်ပြောသည်။ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်ကို စင်ကာပူ အခြေစိုက် Kepple Land ကုမ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သိရသည်။
“ကျမ အခု ပြောနိုင်တာကတော့ ကျမတို့ စစ်ဆေးနေပါတယ် ဆိုတာပါပဲ” ဟု ဧည့်ကြို ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီးကပြောသည်။
ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ဟက်ကာများက ဖောက်ထွင်း ၀င်ရောက်ရာမှ ဗီဒီယို ဖိုင်များ ရရှိသွားပြီး အင်တာနက် ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့သွားခြင်း ဖြစ်သည် ဆိုသည့် ကောလာဟလများကို ဟိုတယ်လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းတဦးက ငြင်းဆိုလိုက်သည်ဟု မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် Elven နေ့စဉ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ဟိုတယ်၏ အခန်းတခန်းတွင် လျှို့ဝှက် ကင်မရာတပ်ဆင်၍ ရိုတ်ကူးထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဟိုတယ်က တပ်ဆင် ထားခြင်း မဟုတ်ဟု အဆိုပါ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းက ပြောကြောင်း Elven နေ့စဉ်သတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ကြော်ငြာ ကုမ္ပဏီတခုမှ ဆက်ဆံရေး အရာရှိဖြစ်သူ ကိုစိုးသူရက ဗီဒီယိုဖိုင်သည် ဟိုတယ်ကို သိက္ခာချရန် အတွက် အတုအယောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အဲဒီ ဗီဒီယို ဖိုင်တင်ထားတယ် ဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် တချို့ကို ကျနော် လိုက်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ အားလုံးက အတုတွေပါ။ ဟိုတယ်ထဲမှာ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဗီဒီယို ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့သူများသည် မည်သူ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကိုလည်း ခန့်မှန်းမှု အမျိုးမျိုး ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ယခင် ကလည်း ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတ လောကမှ ထင်ရှားသူတချို့၏ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးသည်။
သို့သော်လည်း Facebook ပုံမှန်သုံးစွဲသူ တဦးဖြစ်သော ကိုသူရက ထိုဗီဒီယိုကို သူကြည့်၍ မရဟု ဆိုသည်။
“ဖိုင်အရွယ်အစားက အရမ်းကြီးတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့တောင် အဆင်မပြေဘူး။ ဗီဒီယိုတွေက ၁၀ နာရီကြာတယ်တဲ့။ ကျနော်တို့ ဆီက နာမည်ကြီး တချို့လည်း ပါတယ်လို့ ကြားရတာပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရသည် ဆိုသော ဟိုတယ်၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် အခါတွင်လည်း ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်နေသဖြင့် ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း တွေ့ကြရသည်။ Facebook ပေါ်တွင် အစောဆုံးနီးပါး ဖော်ပြခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် စာမျက်နှာ တခုကလည်း Google Drive မှ Link တခု တင်ပေးထားပြီး အရင်ဆုံး တောင်းဆိုသူ များကိုသာ ဗီဒီယိုဖိုင် ကူးယူခွင့်ပြုမည်ဟု ရေးသားခဲ့သည့် အတွက် အင်တာနက် သုံးစွဲသူများ အကြားတွင် စိတ်ဝင်စားမှုများ ပိုမို မြင့်တက် ခဲ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း သတင်းထောက် ကျော်ဆုမွန်၏ Rangoon’s Sedona Hotel Investigating Alleged Secret-Camera Footage ကို နိုင်မင်းသွင် ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုသည်။
AYARWADY BURMESE BLOG
လင်းယုန် နီ - မှ ကူးယူဖော်ပြပေးပါသည်...
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under သတင်းများ | No comments
ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရာတွင် ငွေပေးချေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာဘဏ်များ၌ နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ ဒေါ်လာ ၇ဒသမ ၆ ဘီလီယံထားရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင်က ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၀ရက်က နေပြည်တော်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရုံးတွင်ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် မီဒီယာများတွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားအရန်ငွေပမာဏအား ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
““ကျွန်တော်တို့မှာ တရားဝင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံပဲရှိပါတယ်။ ၁၁ ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောနေတာက ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Foreign Exchange Reserve (နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ)ပါ”” ဟု ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင်ကပြောသည်။
အဆိုပါငွေပမာဏကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ဖက်ပြုလုပ်သော နိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များတွင် ထားရှိပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် (MFTB)၊ မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်(MICB) နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ စုပေါင်းထားရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော်ကျော်မောင်က ရှင်းပြသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံမဆို ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် နိုင်ငံခြားအရန်ငွေများအား မိမိတို့နှင့် ကုန်သွယ်ဖက်ပြုလုပ်သောနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များတွင် အပ်နှံလေ့ရှိကြသည်။ လက်ရှိ ပြည်တွင်း၌ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိထားပြီး ပြည်ပဘဏ်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ပဘဏ်များတွင်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိရကြောင်း ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ-၂ ဦးသန်းလွင်ကပြောသည်။
““နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် များရင်များသလို ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အကောင့်ဖွင့်ထားရတဲ့ငွေပမာဏများမှာပဲ””ဟု ဦးသန်းလွင်ကပြောသည်။
ပြည်တွင်းဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံခြားဘဏ်များကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ အကောင့်များဖွင့်လှစ်၍ ငွေများအပ်နှံထားလေ့ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်းတစ်ရာကျော်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ကုန်သွယ်လျက်ရှိသည်။
ခင်ဗျားတို့ အယ်ဒီတာချုပ်တွေ၊ စီအီးအို ဆိုသူတွေ၊ တိုက်ပိုင်ရှင်တွေထဲ မှာ နံမည်ရင်းနဲ့ Account ဖွင့်ထားတာ၊ လူတိုင်းကိုရေးခွင့်ပြုထားတာ၊ ကိုယ်ကို ဝေဖန်တဲ့ ရေးသား ချက်တွေ၊ ရေးသားသူတွေကို Block မလုပ်ဘဲ ခွင့်ပြုထားတာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ ~ ဦးရဲထွဋ်
မနေ့က သတင်းမီဒီယာများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာ ကျွန်တော့်ကို သတင်းထောက်အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်က အခုလို မေးပါတယ်။
×× အန်ကယ်က သဘောထားကွဲပြားမှုတွေကို လက်မခံနိုင်ဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် မီဒီယာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားရာမှ အဓိက၀င်လုပ်နေတာလို့ ပြောနေတယ်၊ ဟုတ်ပါသလား လို့ လာမေးပါတယ် ××
ကျွန်တော်က သဘောထားကွဲပြားမှုကို လက်ခံနိုင်သလား၊ လက်မခံနိုင်သလားဆိုတာတော့ ကျွန်တော့် Facebook ကိုပဲ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ၊ ခင်ဗျားတို့ အယ်ဒီတာချုပ်တွေ၊ စီအီးအို ဆိုသူတွေ၊ တိုက်ပိုင်ရှင်တွေထဲ မှာ နံမည်ရင်းနဲ့ Account ဖွင့်ထားတာ၊ လူတိုင်းကိုရေးခွင့်ပြုထားတာ၊ ကိုယ်ကို ဝေဖန်တဲ့ ရေးသား ချက်တွေ၊ ရေးသားသူတွေကို Block မလုပ်ဘဲ ခွင့်ပြုထားတာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ။ ပြန်ကြည့် လိုက်ပါဦးလို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ငါးသယ်ယာဉ် ဘရိတ်ပေါက်၍ လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းမှ လူများကို ဝင်တိုက်၊ တစ်ဦးသေဆုံး
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under မှုခင်း | No comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ် အောင်ဇေယျတံတားအဆင်း ကမ်းနား အလယ်ရပ်ကွက် လှိုင်မြစ်လမ်းပေါ်တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် နံနက် ၇ နာရီခန့်က လမ်းလျှောက်လာသည့် လူလေးဦးကို ငါးတင်ဆောင်လာသည့် ယာဉ်က ဘရိတ်ပေါက်ကာ ဝင်တိုက်ရာမှ လူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
မစ်ဆူဘီရှီ ကန်တာ (Canter) ငါးသယ်ယာဉ်သည် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဘက်မှ အောင်ဇေယျတံတားအတိုင်း မောင်းနှင်လာပြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ဘက် တံတားအဆင်းတွင် တစ်ဖက် ယာဉ်ကြောသို့ ရောက်ရှိသွားကာ လမ်းလျှောက်နေသူ အမျိုးသားနှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ကို တိုက်မိသွားကြောင်း၊ ယာဉ်သည် ဆက်လက် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးရှိ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ထပ်မံတိုက်မိခဲ့ကြောင်း မျက်မြင် တွေရှိခဲ့သူ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်နေသူ အသက် ၅၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ၏ ဇနီးနှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်နေသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ အင်းစိန်ကမ်းနားတွင် အလုပ်ဆင်းမည့် ကုန်ထမ်းသမား တစ်ဦးတို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အင်းစိန်မြို့နယ် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စု အမှတ် (၁၄) မှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ကနဦး စစ်ဆေးချက်များအရ သိရှိရသည်။
ယာဉ်တိုက်ခံရသူ လေးဦးအနက် အသက် ၅၀ နှစ်ခန့်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဆေးရုံ အရောက်တွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ကျန်သုံးဦးကို အင်းစိန် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပိုဆောင် ကုသနေကြောင်း အဆိုပါ ယာဉ်ထိန်းရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
လူလေးဦးကို ဝင်တိုက်သည့် ငါးသယ်ယာဉ်မောင်းကို ဖမ်းမိထားပြီး (ပ) ၁၀၉/၁၃၊ ပြစ်မှု ၃၀၄(က)၊ ၃၃၈၊ ၂၇၉ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါ တပ်ဖွဲ့စုရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
ဆိုက်ဘာ မှုခင်းများအား မြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် တိုင်ကြားနိုင်
ပြည် သူမှ ဆိုက်ဘာနှင့်ပတ်သက် သည့် မှုခင်းများအား သက်ဆိုင်ရာမြို့ နယ်ရဲစခန်းတွင် တိုင်ကြားမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ယင်းမှုခင်းများ ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ မှုခင်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှ ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ ဒုရဲမှူးကြီး ထွန်းနေဝင်းကပြော သည်။ ''Cyber Crime နနဲ့ပတ်သက် ပြီး တိုင်ကြားမှုတွေရှိလာပြီဆို ရင် မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ တည်ဆဲ ဥပဒေနဲ့အညီ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ပေးသွား မှာပါ။ ရဲအရေးပိုင်တဲ့အ မှုရှိတယ်။ ရဲအရေးမပိုင်တဲ့အမှု ရှိတယ်။ ဒါမျိုးတွေတော့ကွဲပြား မှုရှိပါတယ်။ တိုင်ကြားမှုတွေရှိ လာရင်တော့ ရဲလုပ်ငန်းအတိုင်း အရေးယူမှုတွေ ဆောင်ရွက်ပေး သွားမှာပါ''ဟု စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှ နည်း ပညာလုံခြုံရေးပိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဒုရဲမှူးကြီး ထွန်းနေဝင်းက ယင်း သို့ပြောသည်။
နည်းပညာပိုင်းအနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက် အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာ နနှင့် နိုင်ငံတကာမှအလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများတက် ရောက်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီး Cyber Security နှင့်ပတ်သက် သည်များကိုလည်း လေ့လာသင် ယူထားကြောင်း သိရသည်။ ''ဆိုက်ဘာမှုခင်းတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ကျွန် တော်တို့ ဌာနတစ်ခုတည်းနဲ့မဖြစ် ပါဘူး။ လက်ရှိမှာလဲ ဆိုက်ဘာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြီးကြီး မားမား တိုင် ကြားလာတာမျိုးတွေ မရှိသေးပါ ဘူး''ဟု ယင်းက ထပ်မံပြောသည်။
ဆိုက်ဘာမှုခင်းများကို ကိုင် တွယ်ဖြေရှင်းရာ၌ အခြားအဖွဲ့ အစည်းများဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၊ ဆက် သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အ လက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊Myanmar Computer Emergency Response team တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆိုက် ဘာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် လက် ရှိဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို အခြေ ခံ၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲရန်လို အပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘလော့ ဂါတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးနေဘုန်းလတ် က ''နောက်ပိုင်းမှာ ဆိုက်ဘာကို အသုံးပြုပြီး အသရေဖျက်တာ တွေ၊ မှုခင်းတွေအများကြီးပိုကြုံ လာမှာပါ။ အဲဒီအတွက် Cyber Police တွေထားရှိဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဥပမာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကိစ္စ မျိုးဆိုရင် ဆိုက်ဘာ ကနေ တစ်ဆင့် ဖြစ်တာပါ။ ဒီလိုတွေအများကြီး နောက်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ပိုင်း ကျယ်ပြန့်လာမှာဆို တော့ မှုခင်းတွေကလဲ ပိုဖြစ်လာ မှာသေချာပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန ချုပ်အနေဖြင့် e-Government လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် G to C လုပ်ငန်းအနေနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၏ ဝက်ဘ် ဆိုက် www.myanmarpoliceforce.org နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာ မျက်နှာ တွင် ရဲဇာနည် အမည်ဖြင့် ၂၀၁၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှစ တင်၍ လွှင့်တင်ပေးခဲ့ပြီး ယင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် မှုခင်းသတင်း များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက် များ၊ ပြည်သူသို့ အသိပေးကြေ ညာချက်များ၊ ဥပဒေစာအုပ်များ ထားရှိပြီး ရဲလုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက် ၍ ပြည်သူတို့၏နစ်နာချက်များ အတွက် တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) တို့ ပူးပေါင်းပြီး အောက်တိုဘာလတွင် ကလေးအလုပ်သမား ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ILO သဘောတူညီချက် ၁၈၂ ချက်တွင် ပါဝင်သည့် ကလေးအလုပ်သမား ပြဿနာ သဘောတူညီချက်ကို အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအာဖြင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ကလေးအလုပ်သမား ပြသာနာများ အပြင် တခြား ကလေးအလုပ်သမား ပြသာနာများကိုပါ ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ILO ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေး အရာရှိ ရန်ကုန်ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Steve Marshall က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကလေး အလုပ်သမားတွေ အလုပ်ခွင်မှာ အချိန်ပြည့်နီးပါး အလုပ်လုပ်နေရတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကြင်မှု
ဖြစ်ပေါ်တာတွေ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း တရားမ၀င် ကလေးအလုပ်သမား တွေကို ILOနဲ့ တခြား ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ စည်းမျဉ်း ဥပဒေအရ စဉ်းစားပေးသင့်တယ်။ ကလေးတွေကို လုပ်ငန်းကနေ ဆွဲထုတ်မှုနဲ့ ကလေးတွေကို ခိုင်းစေတဲ့ သူတွေကို အပြစ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်” ဟု Steve Marshall က ဆိုသည်။
မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုများ၊ ပညာရေး မလိုက်နာနိုင်သည့် ကလေးများ၊ ဘ၀ ရပ်တည်မှုကြောင့် အလုပ် ရှားနေသည့် ကလေးများ အမျိုးမျိုး ရှိနေသည့်ကို အစိုးရ၊ ILO နှင့် တခြား အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း အားဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အဆောက်အအုံများ တိုးတက်ပြီး ဆင်းရဲမှုများ လျော့ကျသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်နေသည့် ကလေးများ အခြေအနေ တိုးတက်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက
ILO နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့၏ ကလေးအလုပ်သမား သဘောတူညီချက် စာချုပ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ အလုပ်သမား အရေးကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် မသက်သက်အောင်က “ကလေး အလုပ်သမား လေးနှစ်ပပျောက်ရေး စာချုပ် ချုပ်မယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ကလေး အလုပ်သမားဆိုတာ မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုကြောင့် ဖြစ်လာတယ် ဆိုတော့ သူတို့ မိသားစုတွေ ပြေလည်နိုင်အောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမှာပါ။ သူတို့ မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုတွေကို လုပ်မပေးဘဲ ကလေးတွေကို အလုပ်ကနေ ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းတဲ့ နေရာတွေ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် ILO ပူးပေါင်းကာ ကလေးအလုပ်သမား များ၏ မိသားစုဝင်များကို အသေးစား အလုပ်အကိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကလေးများအတွက် ရှေရှည် ရပ်တည်ရေးအတွက် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးစေချင်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေး၊ အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ကျောင်းတက်နိုင်ရေးအတွက် ပြုလုပ် ပေးသင့်ကြောင်း၊ ကလေးငယ်များ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အချိန်ကုန်ဆုံး မှုများကြောင့် တိုင်းပြည်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းမသက်သက်အောင်က ဆိုသည်။
“ကလေး အများစုက မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ အဲဒီမှာ ကလေးနဲ့ အလုပ်ရှင် ပြဿနာ တွေက အများကြီး ဖြစ်ကြတယ်။ အားလုံးက အလုပ်ရှင်တွေ ဘက်မှာပဲ ရှိတယ်။ ကလေးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ဘယ်သူမှ မလုပ်ပေးကြဘူး။ ကလေး အလုပ်သမားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးမှာလဲ ဆိုတဲ့အချက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကလေးတွေ သိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော် မြို့နယ်တွင် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လိုက်ပါဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် ဦးမန်းတောင်စိန်က ပြောသည်။
ကလေး အလုပ်သမားများသည် အလုပ်ရှင်များ၏ ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု နည်းမျိုးစုံ ခံနေရသော်လည်း တိုင်ကြားရန် အတွက် ခက်ခဲနေကြကြောင်း၊ အသိဉာဏ် မဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့် မည်သူ့ထံ တိုင်ကြားရမည်ကို မသိရှိကြောင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့် ကလေးများ အကြား ပြဿနာ တက်လျှင် ကလေးငယ်များသာ ခံစားနေရသဖြင့် စိတ်ဝေဒနာ ခံစားရပြီး အရာရာကို ကြောက်စိတ် ဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း ဦးမန်းတောင်စိန်က ဆိုသည်။
ILO ၏ အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်တွင် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်အရွယ် အလုပ်လုပ်ပါက ကလေး အလုပ်သမား အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ယင်း ကလေး အလုပ်သမားများသည် မိဘ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ကျောင်းချိန် ပြင်ပတွင် ပညာရေးကို မထိခိုက်စေဘဲ မိသားစုအတွက် အထောက်အပံ့ ရ၍သော်လည်းကောင်း၊ ကလေးအတွက် မုန့်ဖိုးရှာသည့် အနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့ အလုပ်လုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်သည့် နေရာ၊ ကလေးအရွယ်နှင့် မတန်တရာ ခိုင်းစေသည့်နေရာ မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ထို့အပြင် ကြီးပြင်းလာသည့် အချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းစေသည့် စိတ်ဓာတ် ပျက်ပြားစေသောအလုပ်မျိုးကို ကလေး အလုပ်သမားများအား မခိုင်းစေသင့်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်ကလည်း အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေး အလုပ်သမားများကို တနေ့ ၄ နာရီထက်ပို၍ အလုပ်မခိုင်းသင့်ကြောင်း၊ ခိုင်းစေမှုများ ပြုလုပ်ပါက ၁၉၅၁ ခုနှစ် အလုပ်သမား အက်ဥပဒေ အရ ပြဌာန်းထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ ဖောက်ဖျက်ပါက အလုပ်ရှင်အား ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၅၀၀ နှင့် ထောင်ဒဏ် ပြစ်မှုများ ကျခံစေရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သိသိကြီးနဲ့ မှားတဲ့အမှားတော့ "မိုး" ဘဝမှာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ မိုးဟေကို
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under အနုပညာ | No comments
သိသိကြီးနဲ့မှားတဲ့အမှားတော့ မိုးဘ၀မှာမရှိဘူးဆိုတဲ့ မိုးဟေကိုနောင်မှနောင်တ မရတတ်ဘူး။ လူဆိုတာတော့ အမှားနည်းအောင် ကြိုးစားကြတာချည်းပဲ။ အမှားနဲ့
တော့မကင်းကြဘူးပေါ့။ အဲဒီထဲမှာ အမှားတွေ လုပ်ခဲ့ရင်လည်း အမှား နည်းအောင် နောင်မှာနောင်တမဲ့ အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြင်ပြီး တော့နေတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိ လို့မှားခဲ့တဲ့အမှားကို သူများထောက် ပြမှသိတယ်။ ဪ ဒါအမှားလား၊ အဲဒီအချိန်ကျမှသိတယ်။ အမှားဆိုတာတော့ သိသိကြီးနဲ့ မှားတဲ့အမှား မျိုးတော့ မိုးဘဝမှာမရှိဘူး။ မသိလို့ လုပ်ခဲ့မိတယ်ပေါ့။ သိသွားရင် သြော် ဒါမှားသွားပြီဆိုရင် ကိုယ်မှား ရင်မှားတာကို ဝန်ခံဖို့ဝန်မလေးသလို တောင်းပန်ဖို့လည်း ဝန်မလေးတတ်ဘူး။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်လည်း ဒီစိတ်ပဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင် တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အထိကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ Fashion ကိုတော့ အဓိကဦးစားမပေးဘူး Fashion လို့ရတဲ့ ဟာဆိုရင်တော့ Fashion ပြတယ်။ အိုက်တင်ပြ လို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ အဓိကက အိုက်တင်ကိုပဲ နိုင်အောင်ကြိုးစား ပြီးအိုက်တင် ပိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်း အရမ်းတော်တဲ့အထဲမှာမပါ သေးတော့ အဲဒါကိုပဲအကောင်းဆုံး ပီပြင်အောင်လုပ်နေရတယ်။ ကြိုး စားနေရတယ်။ လတ်တလောမှာ ကိုနေမင်း၊ ဒါရိုက်တာနေသူရိန်တို့ နဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ကား ရိုက်နေပါတယ်။
မက်လုံးတွေ လေတွေကြားထဲကနေ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ ခင်မေခရွှေတော်ဝင် ထုတ်လုပ်ရေးက ဇာတ်ကားလေး ကားရိုက်ကူးမှာပါ။ ရွှေတော်ဝင်က ဇာတ်ညွှန်းတွေ ပေး ထားတာဖတ် နေပါတယ်။ ပထမဦး ဆုံးကတော့ ရန်ကုန်မှာ မင်းရာဇာ နဲ့ရိုက်ဖြစ်မှာပါ။ ရွှေတော်ဝင်နဲ့တော့ စာချုပ်စာတန်း အတွက် ညိုထား တယ်။ သူနဲ့လည်း ရိုက်ဖြစ်မှာပါ။ အောင်ပြည့်စုံ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ဇာတ် ကားနှစ်ကားရိုက် ထားပါတယ်။ ရွှေ တော်ဝင် ထုတ်လုပ်ရေးမှာ ရိုက်ထား တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ အားလုံးက ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အနေနဲ့ ရိုက် ထားတာပါ။ ကာရိုက်တာ အပိုင်းက စပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိပါတယ်။
ယာဉ် ကိုးစီးနှင့် ဆိုင်ကယ် တစ်စီးတို့ကို ဘရိတ်ပေါက်ပြီး ဝင်တိုက်ခဲ့သည့် ၁၂ ဘီးကား
လားရှိုး စက်တင်ဘာ ၂၀
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုး မြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် ညနေ ၃ နာရီခန့်က ရပ်ကွက်(၈) ရေပန်း လမ်းဆုံ၌ ၁၂ ဘီးကားတစ်စီး မန္တလေးမှ မူဆယ်သို့အသွား ဘရိတ် ပေါက်၍ ကားကိုးစီးအား ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲတိုက်မိသည်ဟု သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လားရှိုးမြို့ ရပ်ကွက်(၈) ရေပန်းလမ်းဆုံအရောက် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအတိုင်း ယာဉ်မောင်း သန်းမြင့်(၄၁) နှစ်သည် ယာဉ်အမှတ် ၉ခ/--- နီဆန်းဒီဇယ်(ဏန) ၁၂ ဘီး ယာဉ်အား မန္တလေးမှ မူဆယ် သို့ နှမ်း ၁၆ တန် တင်ဆောင် မောင်းနှင် လာစဉ် လေပေါင်လျော့နည်းကာ ဘရိတ်ပေါက်သွားပြီး မိခင်နှင့် ကလေးရုံးရှေ့အရောက် ရှေ့မှ သွားနေ သော ၂ဂ/--- မတ်တူးအဖြူရောင်ယာဉ်အား ဝင်တိုက်ပြီး ယာဉ်ကိုးစီး နှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတို့အား အဆင့်ဆင့်တိုက်၍ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ၂ဂ/--- မတ်တူး ရှေ့ဘန်ဘာအဖုံး ပျက်စီး၊ နောက်ဘန်ဘာ ဘောနက်ပျက်စီး၊ ရှေ့မီးလုံးများ ပျက်စီးကာ လိုက်ထရပ် ၈ည/---ရှေ့ခေါင်းကျိုးကြေ လေကာမှန်ပျက်စီး၊ ၆င/--- တောင်းအေ့စ်မှာ ရှေ့မီးသီး နှစ်လုံးကွဲ၊ ဘန်ပါကျိုး၊ ဗင်ကား ၁က/--- မှာ နောက်မှန် ကြီးကွဲ၊ ဘယ်ခြမ်းစုတ်ပြတ်၊ ဘေးမှန် ကွဲ၊ ပရိုဘောက် ၁ခ/--- (ဆပ်ဆီး) ဘယ်ဘက်ခြမ်းစုတ်ပြတ်၊ မှန်ကွဲ၊ ကယ်လ်ဒီနာဗင် စီစီ/--- ဘယ် နောက်တံခါး၊ ရှေ့တံခါးဘေး ပိန်ချိုင့်၊ ဗင် ၁က/--- ရှေ့နောက် ဘယ်ညာ တစ်စီးလုံး တွန့်လိမ်ပျက်စီး၊ ဗင် ၁က/--- နောက်ခြမ်းစုတ်ပြတ်၊ မှန်ကွဲ၊ ရှေ့နောက်ပိန်ချိုင့်၊ အေအေ/ --- ဗင် နောက်တစ်ခြမ်းလုံး ကြေမွ ပျက်စီး ခဲ့ပြီး ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူ ယာပါးပွန်းပဲ့၊ ဆိုင်ကယ်နောက်မှ စီးသူ ယာခြေသလုံးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ ရ၊ လိုက်ထရပ်ပေါ်မှ ကိုဇော်မင်းနိုင် ဝဲ၊ ယာခြေသလုံးပေါက်ပြဲ၊ ဒေါ်နေနီလွင် ဝဲခြေကျင်း ဝတ် ကျိုးကြေဒဏ်ရာများ ရရှိ သဖြင့် လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ တက် ရောက်ကုသမှုခံယူစေပြီး ယာဉ်တိုက် မှုဖြစ်စေသူ ယာဉ်မောင်းသန်းမြင့် အသက်(၄၁)နှစ် စစ်ကိုင်းမြို့ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်နေသူအား အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အရက်တားမြစ်ထားသော နိုင်ငံမှ သူရာကျေးကျွန်များ – ကျော်မင်း
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
“ ကံဆိုးတာ တစ်ခုက . . . ပါကစ္စတန်မှာ အရက်သောက် တာဟာ အပန်းဖြေဖို့ အတွက် မဟုတ်ကြဘူး . . .
တကယ့် လက်တွေ့ ဘ၀ထဲက ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် ဖို့နဲ့ စိတ်ဖြေရာ ရှာဖို့ အတွက်ပဲ . . .
ဒီတော့ အရက်ကို ပုလင်းထဲမှာ တစ်စက်မှ မကျန်တဲ့ အထိ သောက်ကြတော့ တာပေါ့ ’’ . . .
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသည် မွတ်ဆလင် အများစု နေထိုင်ရာ နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် အတွက် အရက် သောက်သုံး မှုမှာ တရား ဥပဒေနှင့် မညီပေ။ သို့သော် ယင်းကဲ့သို့သော နိုင်ငံမျိုး ၌ပင် အရက်စွဲမှု ပြဿနာမှာ တစ်စ ထက်တစ်စ ပိုမို ကြီးထွား နေသည်။ လူမှု ဘ၀များ ပျက်စီးပြီး ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များကလည်း အဆိုပါ ယမကာ စွဲလမ်းမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်း နိုင်ရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ် နေရသည်။
ပါကစ္စတန် မြို့ကြီး တစ်မြို့၏ အစွန်အဖျားရှိ လူနေ တိုက်ခန်းတွဲ တစ်ခု၏ အပေါ်ထပ်မှ သန်းခေါင် သန်းလွဲ အချိန်တွင် ကခုန် မြူးထူး ချင်စရာ အက တီးလုံးများ တဖြည်းဖြည်း ထွက်ပေါ် လာနေသည်။ တိုက်ခန်း၏ အတွင်း ဘက်တွင်မူ ဂီတသံမှာ ကခုန်ရာ ကြမ်းပြင် တစ်လျှောက် စိတ်တက်ကြွဖွယ် လှုပ်ခါ နေစေသည်။ အဆိုပါ နေရာ၌ ယမကာ အမျိုးမျိုး ရောင်းချ ပေးပြီး ကော့တေး အရက် ဖျော်စပ် ပေးသော အရက်ဘား တစ်ခု ရှိသည်။ တဖျပ်ဖျပ် လက်နေသော မီးရောင် အောက်တွင် ဒါဇင်နှင့် ချီသော လူများ ရယ်မောရင်း၊ ကခုန်ရင်း၊ သောက်စား ပျော်ပါးရင်း ရှိနေ ကြသည်။
အဆိုပါ ပါတီသည် ယခုအခါ၌ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ မြို့ကြီး များ၌ အမြဲ လိုလို တွေ့ရလေ့ ရှိသော ပါတီများ အနက် တစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း သိုသို သိပ်သိပ်သာ လုပ်လေ့ ရှိသည်။ပါတီပွဲ အတွက် အဖျော် ယမကာ များကို အရက်ပုန်း ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ် သူများ ထဲမှ တရား မ၀င်သော နည်းလမ်း အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပါကစ္စတန်မှ မွတ်ဆလင် မဟုတ်သော လူနည်းစု အတွက်သာ ရောင်းချ ပေးသော အရက်ဆိုင် များမှ လည်းကောင်း ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ လူနည်းစု အတွက်သာ ရောင်းချခွင့် ပြုထားသော အရက်ဆိုင် များက နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ အများဆုံး ဖြစ်သော မွတ်ဆလင် များကို အရက် ရောင်းချ ပေးခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင် သည်။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ အနေနှင့် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ တရားဝင် ထုတ်လုပ်သော အဖျော် ယမကာများ ရှိသော်လည်း ယင်းထုတ်ကုန် များမှာ မွတ်ဆလင် မဟုတ် သူများနှင့် ပြည်ပ တင်ပို့ရန် အတွက် တို့သာ ဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန်မှာ တရားဝင် အားဖြင့် အရက် ရောင်းဝယ် သောက်သုံးမှု ပိတ်ပင် ထားသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည် ဟူသော ဂုဏ်ဒြပ်ကို သေရည် အရက် နှစ်သက် စွဲလမ်းသော လူအချို့က မလျော် ညီအောင် ပြုလုပ် နေကြ သည်။ တရားဝင် ထုတ်ပြန်သော စာရင်း ဇယားများ အရ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် မွတ်ဆလင် ဦးရေမှာ လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိပြီး အဆိုပါ မွတ်ဆလင် အားလုံးကို အရက် သောက်သုံး ခွင့်ပြု မထားပေ။
အကယ်၍ သောက်သုံး ခဲ့ပါက ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ ပြစ်ဒဏ် ပေးရန် ချမှတ် ထားသည်။ သို့သော် တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ဖိအားပေး အရေး ယူမှုတော့ မရှိပေ။ အရက် သောက်သုံး မှုကို မိတ်ဆွေ အပေါင်း အသင်းများ စုဝေး ပျော်ပါးရာ ပွဲများ ၌သာ အများဆုံး တွေ့ရ သော်လည်း အရက်စွဲ မှုပြဿနာ ကတော့ တိုးလာ နေသည်။ ၎င်းတို့၏ ပြောစကား များကို မကိုးကား စေလိုသော အစိုးရ တာဝန်ရှိ သူများက လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ် အတွင်း အရက်နှင့် ဆက်နွှယ် ပတ်သက်သော ရောဂါ ဖြစ်ပွား မှုသည် အနည်းဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် လာကြောင်း ပြောကြား သည်။
ယင်း အချက်ကို သက်သေ ထူနိုင်သည့် ပုဂ်္ဂိလ်က ယခင်က အရက် ကိုစွဲ၍ ယမကာ လုလင် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ဖူးသူ တဟာရ် အာမက် ဖြစ်သည်။ သူသည် ယခုအခါ Therapy Works အမည်ရှိ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကို တည်ထောင် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ သူက အရက် စွဲမှု ပြဿနာ သိသာစွာ တိုးပွား လာမှုကို သတိပြု မိသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ကို သူ စတင် လုပ်ဆောင် ခဲ့သည့် လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ် ကာလတွင် အရက် သောက်သုံးသူ အများစုမှာ အနည်းဆုံး အသက် နှစ်ဆယ်ကျော် အရွယ်များ ဖြစ်ကြပြီး ယခု အခါ ၌မူ အရက် သောက်သုံး သူများ ထဲတွင် အသက် ၁၄နှစ် အထိ ငယ်ရွယ် သူများပင် ပါဝင် လာကြောင်း သူက ဆိုသည်။
တစ်ခါ တစ်ရံ အရက် သောက်သုံး သူများသည် မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် တွဲဖက်၍ နှစ်ပင် လိမ်တာ မျိုးပင် ရှိသည် ဟု သူက ပြောပြသည်။ ပါကစ္စတန်ရှိ အိမ်များတွင် အရက်သည် လွန်စွာ သိုဝှက်သော အရာ ဖြစ်ပြီး အများ အားဖြင့် လူကုံထံ အသိုင်း အ၀ိုင်း ကြားတွင် လည်းကောင်း၊ လက်ထပ် ထိမ်းမြား ပွဲကဲ့ သို့သောလူမှုရေး ဆိုင်ရာ ပွဲလမ်း သဘင် များ၌ လည်းကောင်း သိုသို သိပ်သိပ် ရှိကြ သည်ဟု သူက ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ သားတို့ အရက် သောက်ဖြစ်ပြီ ဆိုလျှင် အမြောက် အမြား သောက်သုံး တတ်ကြကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု ဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် အလုပ် လက်မဲ့နှုန်း မြင့်မားမှုတို့ အပါအ၀င် ပါကစ္စတန်၌ ကြီးမား လှသော လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ဖိအားများ ရှိနေခြင်း အတွက်လည်း အရက် သောက်သုံးမှု များသည်ဟု ယုံကြည် ကြောင်း တဟာရ် အာမက်က ပြောသည်။ “ ကံဆိုးတာ တစ်ခုက ပါကစ္စတန်မှာ အရက် သောက်တာဟာ အပန်း ဖြေဖို့ အတွက် မဟုတ် ကြဘူး။ တကယ် လက်တွေ့ ဘ၀ထဲက ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် ဖို့နဲ့ စိတ် ဖြေရာ ရှာဖို့ အတွက်ပဲ။ ဒီတော့ အရက်ကို ပုလင်းထဲမှာ တစ်စက်မှ မကျန်တဲ့ အထိ သောက်ကြတော့ တာပေါ့ ’’ ဟု သူက သုံးသပ်သည်။
ယခုအခါ အသက် ၆၅နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်သော တဟာရ် အာမက်သည် သူကိုယ်တိုင် ပင်လျှင် ယင်းကဲ့သို့ အရက်ကို စိတ်ထွက်ပေါက် အတွက် အလွန် အကျွံ သောက်သုံး ခဲ့ဖူးသည်။ သူ၏ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦး အရက်ကြောင့် ဖြစ်သော အသည်း ရောဂါဖြင့် သေဆုံး သွားရ သည်ကို မျက်ဝါး ထင်ထင် တွေ့မြင် ခဲ့ရပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း သေလု နီးနီး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ရ ဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် အရက် ဖြတ်ရန် သူ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပြီး တစ်နှစ် ကြာအောင် စိတ်ဓာတ် ထိခိုက် ကျဆင်းမှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် မှသာ အရက် ဖြတ်သည့် ရောဂါ ကုထုံးဖြင့် ကုသမှု ခံယူ ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ ကိုယ်ပိုင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အဖွဲ့ အစည်းကို ထူထောင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့အဖွဲ့ အစည်းကို ဗြိတိန် နိုင်ငံ၏ စိတ်ဝေဒနာ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ကုသမှု ဆိုင်ရာ ဗဟို ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ အစည်းတွင် မှတ်ပုံတင် ခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံရှိ လူချမ်းသာ အသိုင်း အ၀ိုင်း ကြားတွင် အထူးသဖြင့် အရက် သောက်သုံး မှုမှာသိသာ ထင်ရှားသည်။ အချို့သော ထိပ်တန်း နိုင်ငံရေး သမားများသည် အရက် သောက်သုံးသည် ဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိပြီး ရုပ်သံ မှတ်တမ်း ရိုက်ကူး မခံရ နိုင်သော အထက် တန်းလွှာ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ပွဲလမ်း သဘင် အချို့တွင် အရက်ဖြင့် ဧည့်ခံမှုမျိုး ရှိနေသည်။ သို့သော် အရက်၏ ဆိုးကျိုးက လူတိုင်း အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် လကပင် ကရာချိ မြို့၌ အဆိပ် ဖြစ်သော အိမ်လုပ် ချက်အရက်ကို သောက်မိ ရာမှ အနည်းဆုံး လူ ၁၂ ဦး သေဆုံး သွားခဲ့ ရသည်။
ပါကစ္စတန်မှ အချို့သော အရက်စွဲ သူများ ဆိုလျှင် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ အရက် စွဲသည့် ဖြစ်ရပ်က အခြား အရာ အားလုံးထက် ပိုမို ဆိုးဝါးသည့် အမည်း စက်ကြီး ဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး မြို့ရှိသည့် လာဟိုးမှ ဆာရာ ဟူသော အမျိုးသမီးက သူမ၏ ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်ပြောင်း ပြောပြသည်။ (ဆာရာ ဟူသည်မှာ အမည်လွှဲ ဖြစ်သည်) လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်က သူမ အသက် ၃၃နှစ် အရွယ်တွင် ဆယ်ကျော် သက်အရွယ် ကလေး နှစ်ဦးနှင့် အတူ လင်ယောက်ျား၏ ကွာရှင်း စွန့်ပစ်ခြင်း ခံခဲ့ ရသည်။ ထို့နောက်တွင် အရက် နွံနစ်ကာ သုရာ ကျေးကျွန် ဖြစ်ခဲ့ ရသည်။ သူမသည် တစ်ကြိမ် တည်းနှင့် ရက်ဆက် အောင်သောက် သုံးကာ မူးမေ့ လဲကျသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။
“ ကျွန်မ နိုးလာပြီ ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက် သုံးရက်က ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာတွေ မမှတ်မိ တော့ဘူး။ ကျွန်မ တော်တော်လေး မူးမူး သွားတာ။ နောက်တော့ ကျွန်မ တကယ်ကို အထိတ် တလန့် ဖြစ်လာတယ် ’’ ဟု သူမက ဆိုသည်။ သူမ၏ သတင်း ပျံ့နှံ့ သွားပြီး ကလေး နှစ်ဦးနှင့် အကျပ် အတည်း ဖြစ်လာ ချိန်တွင် ဆာရာသည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဆေးခန်းသို့ သွားချင် ခဲ့သည်။ သို့သော် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး အနေနှင့် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရန် လွန်စွာ ခက်ခဲ လှသည်။ နောက်ဆုံး တွင်မှု အထောက်အပံ့ တစ်ခုကို လွန်ခဲ့ သော ကိုးလက သူမ ရရှိ ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးများ ရယူကာ နေအိမ် ၌ပင် Therapy Works အဖွဲ့ ထံမှ ရောဂါ ကုထုံး အခြေပြု အကူအညီကို ရရှိ ခဲ့သည်။ ယခုအခါ သူမ အနေနှင့် မူလ အခြေအနေ အတိုင်း ပြန် လည် ကောင်းမွန် နေပြီ ဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဈေးကွက် အတွင်း လွန်စွာ တင်းကျပ်သော ပြုစု ကုသမှု များဖြင့် ၀န်ဆောင် ပေးသည့် အခြားသော ဆေးခန်း များသည်လည်း ရှိသည်။ ကရာချိမြို့မှ Willing Ways အမည်ရှိ ဆေးခန်း တစ်ခုတွင် အဆိုပါ ဆေးခန်းကို ထူထောင်သော ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး ပြောကြား နေသည့် လူနာ အသစ်၊ အဟောင်းများ ပါသော လူအုပ် တစ်အုပ်ကို တွေ့ခဲ့ ရသည်။
လူနာ များကို ၎င်းတို့၏ မိသားစု များ၏ သဘောတူ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် လက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့ကို သုံးလ ကြာအောင် ပိတ်လှောင် ထားမည် ဆိုသည်ကို သူတို့ မသိရှိ ကြပေ။ အဆိုပါ နေရာ၌ နေထိုင် ကုသစဉ် ဆေးရွက်ကြီး အပါအ၀င် စွဲလမ်း စေသော အရာ အားလုံးကို သုံးစွဲခွင့် ပိတ်ပင် ထားပြီး ပြင်ပနှင့် အဆက် အသွယ် အားလုံးကို ဖြတ်တောက် ထားသည်။ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခွင့် ရရှိ ခဲ့သော လူနာဟောင်း တစ်ဦးက သူ့အနေနှင့် အဆိုပါ ကုသမှုသည် လွန်စွာ ပြင်းထန် ကြမ်းတမ်း လွန်းသည်ဟု ခံစား မိကြောင်း ပြောကြား သည်။ သို့ သော် ယင်း ကုသမှုကို စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိသော လူနာဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ယူဆွပ် အူမာက တင်းကျပ်စွာ စည်းကမ်း ထိန်းချုပ် ကုသခြင်းမှာ သူ့အကျိုး စီးပွား အတွက် လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသည်။
“ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘ၀ကို ဒါက ပြောင်းလဲ သွားစေ တာပဲ။ အခု ဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ အရမ်း အောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်နေပြီ ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဆေးခန်း များနှင့် ရောဂါ ကုထုံး ကျင့်စဉ် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများက အရက်စွဲမှု ပြဿနာကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း နေသကဲ့သို့ ယခုအခါ မီဒီယာ မှလည်း ယင်းကိစ္စကို ပါဝင် ဆောင်ရွက် လာသည်။ ကရာချီမြို့ ၏ အက်ဖ်အမ် ရေဒီယို လှိုင်း ၉၁ မှ အစီအစဉ် တင်ဆက်သည့် စိတ်ရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ပိုင်ဖယ်မမ်ဆာ က ကြာသပတေး နှင့် သောကြာနေ့ ညတိုင်းတွင် အရက် သောက်သုံးမှု အပါအ၀င် လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ရှောင်ကြဉ် ရမည့် အရာများ အားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ အပြန် အလှန် ဟောပြော ဖြေကြား မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။
ဆက်ပြောပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် နားထောင် နေပါ တယ် ” ဟူ၍ ညင်သာ ပျော့ပျောင်းသော အသံဖြင့် သူက ဖုန်းခေါ် သူများကို ပြောတတ်သည်။ ရှုပ်ထွေး၍ ဘုတ်သိုက် ဖြစ်နေသော ဆံပင် မုတ်ဆိတ် များဖြင့် သဘော ကောင်းပုံရသော မျက်နှာ ထားနှင့် သူ့ကို စတူဒီယိုထဲ၌ ဘောင်းဘီတိုနှင့် တွေ့ရသည်။ သူနှင့် ဆွေးနွေး ပြောဆို မှုများမှာ အင်္ဂလိပ်နှင့် အူရဒူ ဘာသာ စကားများ ရောနှော လျက်ရှိသည်။ အရက်စွဲမှု ပြဿနာ အတွက် ရတက် မအေး ဖြစ်နေရသော မိသားစု ၀င်များ ထံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှင့် စာရေးသား ပေးပို့မှု များကို အဆိုပါ အစီ အစဉ်က တိုက်တွန်း အားပေးသည်။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဆိုလျှင် သူမ၏ ခင်ပွန်း အရက်သောက် နေသည် မှာ ၁၃နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး သူမ အနေနှင့် ဖျောင်းဖျ ပြောဆို၍ မရကြောင်း ရင်ဖွင့် ထားသည်။ ရေဒီယိုမှ ဆရာဝန်က ယင်းကဲ့သို့သော လူများကို အမည်မသိ အရက်စွဲ သူများ အဖွဲ့ အစည်းသို့ ဆက်သွယ်ရန် အကြံ ပေးလေ့ ရှိသည်။ နောက်ထပ် ဖုန်းခေါ်သူ တစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ် သူဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ ထားသည့် အရက် စွဲသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အကြောင်း အရာများ အတွက် ရေဒီယိုမှ အမည် မဖော်ဘဲ ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ မမ်ဆာကဆို
သည်။ “ နာမည် တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ပူပန် မနေပါဘူး။ ပြဿနာ တစ်ခုကို သူတို့ ပြောဆိုတဲ့ အခါ သူတို့ အတွက် လောက်ပဲ အကျိုးရှိ သွားတာပဲ။ ပြဿနာကို ဘယ်လို ဆွေေးနွး ဖြေရှင်းလဲ ဆိုတာက အဓိက ပဲလေ ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ မှာတော့ နောင်လာမည့် နီးကပ်သော အနာဂါတ် ကာလ အတွင်း အရက် သောက်သုံး ရောင်းဝယ် မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေ အရ ပြောင်းလဲရန် အခွင့်အလမ်း ရှိဦးမည် မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် အစိုးရ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် ဆရာဝန် များက တိုးပွား နေသည်ဟု ပြောဆို ထားသော အရက် စွဲမှု ပြဿနာ ကတော့ ရှိနေ ဦးမည် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ အနည်း ဆုံးတော့ အရက် စွဲသူများသည် ယခု အခါ ရောဂါ အပေါ် ဆွေးနွေး ပြောကြား လာကြပြီး အချို့မှာ အဆိုပါ ဆင်းရဲ ဒုက္ခမှ လွတ်မြောက် နိုင်မည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေ လာ နေ ကြပြီ ဖြစ်သည်။
အဖေနဲ့ သား (ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပေးပါ)
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
အဖေတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့တစ်နေကုန်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကနေ ပင်ပန်းစွာနဲ့ နောက်ကျမှ အိမ်ကိုပြန် လာခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ ၅ နှစ်အရွယ်သားလေးက အဖေ့ရဲ့ အိမ်အပြန်ကို တံခါးပေါက်ကနေ စောင့်နေတယ်။
သား - “ အဖေ... သားတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလား...”
အဖေ - “ ရတာပေါ့ .. သားရယ်.. ”
သား - “ အဖေ .. တစ်နာရီ အလုပ်လုပ်တာ ဘယ်လောက်ရလဲ ”
အဖေ - “ ဒါ.. သား အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးကွာ...... ”
သား - “ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ .. သားကိုပြောပြပါ... အဖေ”
အဖေ - “ အဖေ တစ်နာရီ အလုပ်လုပ်တာ ဒေါ်လာ 20 ရတယ် သားရဲ့...”
သား - “ ဒါဆို .. အဖေ ..သားကို ဒေါ်လာ 10 ချေးပေး ”
အဲ့ဒီလို ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ အဖေဟာ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ သူ့ရဲ့သားကို အော်ပြီး အိပ်ယာဝင်ဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ရဲ့သားဟာ မျက်နှာလေးညှိုးနွမ်းစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ အခန်းလေးထဲဝင်သွားပြီး တံခါးပိတ်လိုက်ပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ စိတ်အနည်းငယ်ပြေသွားတဲ့ အဖေဟာ သားရဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်လာပြီး ..
အဖေ - “ အဖေ ကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံမိတဲ့အတွက် .. ဝမ်းနည်းပါတယ်သားရယ်.... ရော့ .. ဒီမှာ သားအတွက် ဒေါ်လာ 10 .. ဒါနဲ့... ဒီပိုက်ဆံနဲ့ သား ဘာလုပ်မှာလဲ .”
သူ့ရဲ့ သားလေးဟာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ သူ့အဖေကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်း
ပြောလိုက် ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကောင်လေးဟာ သူ့ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ဝှက်သိမ်းထားတဲ့ အကြွေစေ့ လေးတွေကို ထုတ်ရေတွက်လိုက်ပြီးတော့ သူ့အဖေကိုပြောတယ်...
သား - “ အဖေ . အခု သားဆီမှာ ဒေါ်လာ 20 ရှိသွားပြီ.. အဲ့ဒီပိုက်ဆံနဲ့ သား အဖေ့ရဲ့ အချိန်တစ်နာရီဝယ်မယ် ... မနက်ဖြန် အိမ်ကို စောစောပြန်ခဲ့ပါ .. အဖေနဲ့အတူတူ သား ညစာစားချင်တယ်...”
အဲ့ဒီလို ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ .. အဖေဟာ မျက်ရည်ကျပြီးတော့ သူ့သားကို ပွေ့ဖက်လိုက်ပါတော့တယ်...။
ဝက်ရူးပြန်အတက်ကျဆေးကြောင့် မွေးရာပါချို့တဲ့ကလေးများ မွေးသလား
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ဝက်ရူးပြန်တတ်တဲ့ အမေဟာ ဝက်ရူးပြန်အတက်ကျဆေး 'ဗာပရို ရိတ်(Valproate) စွဲသောက်ခဲ့ရင် မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ မွေးရာပါချို့ ယွင်း၍ မွေးလာကြောင်း 'ဦးနှောက် နဲ့အာရုံကြောဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြ ထားတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ဝက်ရူး ပြန်အတက်ကျဆေးဗာဖရိုရိတ် (val- proate)ဟာ မွေးလာတဲ့ကလေးကို 'အော်တင်ဇင်' အငြိမ်မနေကလေး များ မွေးဖွားစေနိုင်ဖို့များကြောင်း ဆိုပါတယ်။ သည်ဆေးကို ခေါင်းတစ် ခြမ်းကိုက်၊ ခေါင်းနာရောဂါမှာလည်း သုံးနေတော့ အမေရိကန်အစား အစာနဲ့ ဆေးဝါးအဖွဲ့က ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင်များ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ခံစားရရင် 'ဗေပလိုရိတ်'မသုံးဖို့ သတိပေးကြေငြာခဲ့တယ်။
ဩစတြေးလျ၊ မဲလ်ဘုန်း တော်ဝင် ဆေးရုံကြီးရဲ့ 'ဩစတြေးလျ ကိုယ်ဝန် သည်စာရင်းအင်းဌာန သုတေသီ'အဖွဲ့တစ်ခုက ဝက်ရူးပြန်မိခင် (၁၇၀ဝ)ကျော်လေ့လာတဲ့စာရင်းမှာ ပထမကိုယ်ဝန်နုစဉ် ဝက်ရူးပြန်ဆေး လျော့သုံးဖို့နဲ့ မွေးချိန်အထိ 'ဗာပရို ရိတ်'လျော့သုံးဖို့ ဆိုတယ်။
ဝက်ရူးပြန်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီး များ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေခြင်းဟာ လည်း အကြောက်အလန့်ပြည့်နှက် လျက်ရှိတယ်။ သည်မိခင်လောင်း များဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကလေးမွေးဖို့ မလွယ်ဘူး။ ယခင်လေ့လာမှုများအ ရ မိခင် 'ဗေပလိုရိတ်'သောက်တာ ဟာ ကလေးမယူသင့်ဘူး။ ယူရင် မွေးရာပါချို့တဲ့ကလေးရနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေ ဝက်ရူးပြန် မိခင် ဟာ ဗာပရိုရိတ်ဆေးသာ အတက်ကျ စေလို့ ဆေးဖြတ်လို့တော့မရဘူး။ ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလမှာ ဆေးလျော့ သုံးသင့်တယ်။ ဒါမှ ချို့ယွင်းမှုနည်း စေမယ်လို့ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ တယ်ရီအိုဘရင်'က ဆိုတယ်။
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာ ဓားနဲ့ခုတ်၊ တုတ်နဲ့ရိုက်၊သေနတ်နဲ့ပစ်၊ဗုံးနဲ့ခွဲမှ Genocide လို့သတ် မှတ်မှာလား။ ဟောဒီမှာ ဒါဟာခင်ဗျားတို့ကျုပ် တို့ကိုမသိမသာ Genocide လုပ်နေတယ်ဆိုတာလေး သိသာအောင်မြင်ကြည့်ကြ ရအောင်။
ဇာတ်မတူသည့် ချစ်သူစုံတွဲ လက်ထပ်ရန်စီစဉ်၍ မိန်းကလေးရှင် မိသားစုဘက်က သတ်ဖြတ်
ဇာတ်မတူသည့် မိသားစုနှစ်စုမှ လက်ထပ်ရန်ရည်စူးထားသော ချစ်သူ စုံတွဲတစ်တွဲကို သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟာရာနာပြည်နယ်တွင် လူလေးဦးကို ရဲကဖမ်းဆီးထား ကြောင်း ဘီဘီစီသတင်းတွင် စက်တင် ဘာ ၁၉ ရက်က ဖော်ပြသည်။
ရိုဟတိတ်ခ်ျ ခရိုင်အတွင်း အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားကို ထုရိုက်ကန်ကျောက် ခေါင်းဖြတ် သတ်ပြီး ချစ်သူ အသက် ၂ဝ ရှိ မိန်းကလေးတို့ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည် ဟု ရဲဌာန၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
မိန်းကလေးဖြစ်သူ၏ မိဘနှစ်ပါး နှင့်အစ်ကိုတော်သူတို့အပြင် အခြား သူတစ်ဦး တို့ကိုပါ အဆိုပါလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊ ¤င်းတို့က မည်သည့် ထင်မြင်ချက်မှ မပေးကြောင်း ဘီဘီစီ သတင်းဌာနသို့ ရဲဝန်ထမ်းများက ပြောကြားသည်။
သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရသည့် ချစ်သူ စုံတွဲသည် မိန်းကလေးရှင် မိသားစုက သဘောမတူ ကန့်ကွက်သည့် ကြားမှ လက်ထပ်ရန်စီစဉ်ကြသည့် ကောလိပ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ စုံတွဲဖြစ် သည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား မိသားစုဘက်မှ ရဲဌာန နှင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းမကြားခြင်း ကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေး နေကြောင်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ အသွင်နဲ့ အင်္ဂလန်မှာ တာစားနေတဲ့ နာအိုမီဝပ်Candle In The Wind နှုတ်ဆက် အလွမ်းတေး သွားနဲ့ ဝေလ မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာရဲ့ ဈာပနမှာ အဆိုကျော် အယ်လ်တန်ဂျွန် ဆွေး ဆွေးမြေ့မြေ့ ကြေကြေကွဲကွဲ သီဆိုခဲ့တဲ့မြင်ကွင်း ပုံရိပ်တွေဟာ အခုဒိုင်ယာ နာတစ်ကျော့ပြန် ဇာတ်ကားသစ် Diana ရုံတင်ချိန်ရောက် လာတော့ အင်္ဂလန်သားတွေ အတွက် အဟောင်းတွေက အသစ်ပြန်ဖြစ် ရပြန်ပြီလို့ မိုင်ရာကအမှတ်တရ စကားဆို လာပါတယ်။ ပါရီမှာ ယာဉ်တိုက်မှုနဲ့ အင်္ဂလန် နှင်းဆီကြွေလွင့် ခဲ့ရတာ နှစ်တွေလတွေကြာညောင်း ခဲ့ပြီဖြစ်သလို သားကြီး ဩရသဝီလျံ မင်းသားတောင် ကလေး အဖေဘဝရောက်ရှိ လာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဝေလမင်းသမီးဒိုင်ယာနာကို မမေ့ကြသေးသူတွေက အများကြီးမှ အများ ကြီးပါလို့လည်း မိုင်ရာကဖွလာတာ အကြောင်းတော့ ရှိပါတယ်။ အခုရက် သတ္တပတ်ထဲမှာ ဗြိတိန်မှာ စတင်ပြသတော့မယ့် ဇာတ်ကားသစ် Diana အတွက် ဖွပေးနေခြင်းဖြစ်သလို အင်္ဂလန်သူချော နာအိုမီဝပ်ကိုယ်တိုင် တော်ဝင်နှင်းဆီ အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ ဖမ်းစားထားတယ် ဆိုတာကိုပါ လက်တို့ အသိပေး လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောလိဝုဒ်စူပါမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး UN AIDS ရဲ့ အထူး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ နာအိုမီဝပ်ဟာအင်္ဂလန်၊ ဩစတြေးလျ နှစ် နိုင်ငံသားခံယူထားသူဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိမြေက ကင့်ဒ်ဒေသက Shoreham မြို့နယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာမှ ဆစ်ဒနီက ဘိုးဘွားတွေထံပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ပြီး ဆစ်ဒနီသူချောနစ် ကိုးလ်ကစ်မင်းနဲ့ကျောင်းနေဖက်တွေဖြစ်ခဲ့ကြရတာလည်း ကံကြမ္မာရဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ ရွေ့ကွက်လို့ ယုံကြည်ရမှာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဘဝတူ သရုပ်ဆောင်မင်းသားလီရှရက်ဘာနဲ့ ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ထားသူ နာအိုမီဝပ်ဟာ King Kong ဇာတ်ကားနဲ့ ဟစ်ဖြစ်လာခဲ့သလို The International တို့၊ The Painted Veil တို့၊ Fair Game တို့နဲ့ အောင်မြင် မှုကိုထိန်းထားနိုင်သူ ဩစီဝင်ငွေအကောင်းဆုံးငွေကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ အော်စကာဆုရှင် စူပါမင်းသမီးချောနာအိုမီဟာ အခုဝေလ မင်းသမီး အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူ စကားဆိုလာပါတယ်။
“တော်ဝင်နှင်းဆီ ဒိုင်ယာနာဟာ ကျွန်မတို့ဗြိတိန်သူအားလုံးရဲ့ စံပြ နတ်မိမယ်တစ်ဦးပါ၊ ပါရီမှာ သူကြေလွင့်ခဲ့ရတာ မယုံနိုင်စရာကောင်း သလို အခုဒိုင်ယာနာ အသွင်နဲ့ အစားဝင်ပီပြင်ခွင့် ရတာကိုလည်း အိပ်မက် လိုခံစား ရပါတယ်။ ချစ်ကံခေတဲ့ တော်ဝင်မင်းသမီးရဲ့စတိုင်တွေ ဟန်တွေ ကို ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက သဘောကျ ခဲ့တာကြောင့် အခုလက်တွေ့ သရုပ်ဆောင်တော့ အခက်အခဲသိပ်မကြုံခဲ့ရပါဘူး။ ဒိုင်ယာနာ ပရိသတ် တွေ အလွမ်းပြေတယ်ဆိုရင် ကျွန်မအပင်ပန်း ခံရကျိုးနပ်ပါတယ်”လို့ ရင်ဖွင့်စကားဆိုလာပါတယ်။ မင်းသားချော နာမင်အင်ဒရူးက ဒေါက် တာဟာနက် ခန်အသွင်အနုပညာစွမ်းပြထားပြီး ဒိုဒီအသွင်နဲ့ ငွေကြယ်ပွင့် သစ်ကတ်စ်အန် ဗာတို့ပီပြင်ထားပြီး ဆစ်ဒနီအလန်းဇယား နာအိုမီဝပ်ရဲ့ ဒိုင်ယာနာပုံရိပ်တွေက ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဝေလမင်းသမီးရဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို အလွမ်းပြေကျေနပ်စေမှာသေချာနေပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါး ရင်း။
အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှု နှေးကွေး နေမည်ဆိုပါက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ဖြစ် စေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့် ဤပြဿနာကို ပြေလည်စေနိုင် သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပြောဆို ချက်အရ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း သည် နှလုံးနှင့်ကြွက်သားများကို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေသည်။ လေ့ကျင့် ခန်းလုပ်ခြင်းသည် အူသိမ်၊ အူမများ ၏ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။
အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများ သည် အသက်ရှူမှုနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း ကိုမြင့်တင်ပေးသဖြင့် အူအတွင်း ပိုင်းကြွက်သားများလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ကူပြီး အညစ်အကြေးစွန့် ခြင်းကို အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစာအဝစားပြီး (၁)နာရီ ခန့် ကြာပြီးမှ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြု လုပ်ပါ။ အစာစားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လျှင် သွေးများက နှလုံးနှင့် ကြွက်သားများဆီသို့ ရောက်ရှိသွား သည်။ သို့ဖြစ်၍ အစာစားပြီး အစာ ကြေသွားမှ တောက်တက်ကစားနည်း ကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ် ပါ။
တစ်နေလျှင် ပုံမှန် ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ် ၁၀ -၁၅ မိနစ် လမ်းလျှောက် ပေးပါ။ အကယ်၍မိမိက ကြံ့ခိုင် နေသူဖြစ်ခဲ့လျှင် ပြေးခြင်း၊ အနှေး ပြေးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ အက စသည် တို့ကို ပြုလုပ်ပါ။ ယောဂလေ့ကျင့်စဉ် များဖြင့်လည်း ဝမ်းချုပ်မှုမဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဂျရတ်လက်သစ် လူငယ်လေးကို မာဆေးဆိုက်နှစ်သင်း အပြိုင်ချိတ်ဆက်နေ
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
ဂျရတ်လက်သစ် လူငယ်လေးကို မာဆေးဆိုက်နှစ်သင်း အပြိုင်ချိတ်ဆက်နေ အသက်(၁၈)နှစ်သာ ရှိသေး သည့် ဒါဘီကောင်တီ ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဝီလ်ဟုဂ်ျသည် လီဗာပူးလ် ဂန္ထဝင် အသင်းခေါင်း ဆောင်ကြီး ဂျရတ်နှင့် တင်စားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ခံရသူလည်း ဖြစ်သည်။
စတီဗင်ဂျရတ် လက်သစ်ဟု တင်စားခံရသည့် လူငယ် ကစားသမားလေး တစ်ဦးကို မာဆေးဆိုက် အခြေ စိုက် နှစ်သင်းလုံး အပြိုင်ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သိရှိရသည်။ အသက်(၁၈)နှစ်သာ ရှိသေးသည့် ဒါဘီကောင် တီ ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဝီလ်ဟုဂ်ျသည် လီဗာပူးလ် ဂန္ထဝင် အသင်းခေါင်းဆောင်ကြီး ဂျရတ်နှင့် တင်စားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ခံရသူလည်း ဖြစ်သည်။ Daily Express သတင်းစာက ၎င်းကို လီဗာပူးလ်အသင်းက အလေးအနက် စောင့်ကြည့်နေပြီး ယခုအခါ အဲဗာတန်ကပါ ချိတ်ဆက်လာကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဲဗာတန်သည် ဟုဂ်ျအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတွင် မြို့ခံပြိုင်ဘက်ကို လက်ဦးမှုယူကာ ဇန်နဝါရီ ဈေးကွက် အတွင်း တွင် ကမ်းလှမ်းလာနိုင်ကြောင်းလည်း ယင်းသတင်းစာက ဆိုသည်။ အဲဗာတန် မန်နေဂျာ ရောဘတ် တို မာတီနက်ဇ်သည် ကလပ်အသင်း၏ ကင်းထောက်နှစ်ဦးနှင့်အတူ ဒါဘီနှင့် ဘော်လ်တန်တို့ (၂)ဂိုးစီ သရေကျ သည့် ပွဲစဉ်တွင် ဟုဂ်ျကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည်။ ရီးဘော့ခ် ကွင်းကြီး အတွင်း လူငယ်ခြေတက် Playmakerလေး၏ စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မာတီနက်ဇ်က အလေးအနက် စောင့်ကြည့်လိုသော်လည်း ကစားသမား ဒဏ်ရာရသွားသဖြင့် ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ချေ။
လီဗာပူးလ် မန်နေဂျာ ဘရန်ဒန်ရော့ဂျာသည်လည်း ဟုဂ်ျကို ကာလရှည်ကြာ အကဲခတ် လေ့လာနေခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဘော်လ်တန်နှင့် ပွဲစဉ်တွင် ဟုဂ်ျသည် တင်ပါးဒဏ်ရာကြောင့် လူစားလဲခဲ့ရသော်လည်း သွင်းဂိုး တစ်ဂိုး အတွက် ဖန်တီးမှု ပြုလုပ်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဘီမန်နေဂျာ နီဂယ်လ်ကလော့ဂ်ျကမူ မိမိတို့ အနေဖြင့် ကစား သမားကို ဈေးပေါပေါ လက်လွှတ်မည် မဟုတ်ဟု သတိပေးထားသည်။ ၎င်းက "သတင်းတွေ ကတော့ သူတို့ဖာသာ ပေါင်စတာလင် (၆)သန်းလို့ ဈေးသတ်မှတ်နေတာပါပဲ။ ဒီဈေးနှုန်းဟာ မျှတကောင်း မျှတ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က သူ့ကို ရောင်းထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးလေ။ ဆိုလိုတာက ဒီဈေးမျိုးနဲ့ ကမ်းလှမ်း လို့ ဟုဂ်ျကို ရောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ အာမခံမှာ မဟုတ်ဘူး"ဟု ပြောကြား ထားသည်။
မော်လမြိုင် စက်တင်ဘာ ၁၉
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် ရန်ကြီး အောင်ရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနေ ရော် ဘာခြံပိုင်ရှင် အလုပ်ရှင် အ သက် (၄၂နှစ်)အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကို ရိုက်နှက်သေဆုံးမှုဖြင့် တိမ်းရှောင် နေသူကို မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပြည် နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့၏ကြီးကြပ်စီစဉ်မှုဖြင့် ပြည်နယ်မှုခင်း အကူဌာနမှ ဒုတိယရဲ အုပ်စည်သူကျော် နှင့်အဖွဲ့ လှိုင်နယ်မြေ မြေနီကုန်း ကားဝင်းတာဝန်ကျ ဒိုင်းဝန်ကွင်းနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်မြင့်စိုး၊ ရဲတပ်ကြပ် အောင်ကိုဇော်တို့အဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က မော်လမြိုင်မြို့ မြေနီ ကုန်း ကားဝင်းအတွင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီး အောင်တံခွန်တိုင်း အုပ်စု တိုက် ကြီးကုန်းကျေး ရွာနေ မောင်မျိုးဝင်း(ခ)နိုင်ဝင်းအောင်(၂၄ နှစ်)အား ရှစ်ရက် အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိလိုက်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ မောင်မျိုးမင်း(ခ)နိုင်ဝင်းအောင်သည် စက်တင်ဘာ ၇ ရက် ညနေ ၅နာရီက ရော်ဘာခြံ ပိုင်ရှင် ရေးမြို့နယ် ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနေ ဒေါ်ခင်စန်း(ခ)မကျား က အိမ်နောက်ဖေး မီးဖိုချောင် တွင် ပန်းကန်ဆေးနေစဉ် အသင့်ကိုင် ဆောင်လာသည့်တုတ်ဖြင့် ခြောက် ချက်၊ ခုနစ်ချက် ရိုက်လိုက်ရာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး၍ ရိုက်သူက လက်လွတ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် သွားခဲ့သည်။
ရိုက်နှက်သူ မောင်မျိုးမင်း(ခ) နိုင်ဝင်းအောင်သည် သေဆုံးသူ၏ ရော်ဘာခြံတွင် တစ်လလျှင် စရိတ် ငြိမ်း ငွေကျပ် ရှစ်သောင်းဖြင့် အလုပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာတွင် သေဆုံးသူ ဒေါ်ခင် စန်း(ခ)မကျားက အလုပ်သမားချင်း အတူတူ ခွဲခြားဆက်ဆံသဖြင့် မကျေနပ် ၍ အလုပ်ရှင်ကို ရက်စက်စွာ ရိုက် နှက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူ မောင်မျိုးမင်း(ခ)နိုင်ဝင်းအောင် (၂၄ နှစ်)ကို ရေးမြို့မ ရဲစခန်းက စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက စက်တင်ဘာ ၁၇ရက်တွင် ရေးမြို့ နယ်တရားသူကြီး ဦးအောင်မြင့်ထံ ဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မော်ဒယ်ခင်လပြည့်ဇော် ရဲ့ လန်းချက်၉လောက်ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံများ
Posted by drmyochit Saturday, September 21, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အိမ်ခြေ ၇,၀၀၀ နီးပါးရွှေ့ပြောင်းရပြီး လူဦးရေသုံးသောင်းကျော် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် နေထိုင်နေရ
မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမူကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အိမ်ခြေ ၇,၀၀၀ နီး ပါးရွှေ့ပြောင်းရပြီး လူဦးရေ ၃၀,၀၀၀ ကျော် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် နေထိုင်နေရ ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာ ၀န်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာလဆန်းမှစတင်ပြီး မိုးအ ဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဧရာဝတီမြစ် ရေနှင့် ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ရေ တို့မှာ စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက် မြင့်တက်လာပြီး ရေဘေးဒုက္ဓကို မန္တလေး၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေ သကြီး တို့ တွင် အဓိကခံစားနေရပြီး ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ဧရာ ၀တီတိုင်းဒေသကြီး များတွင် ဆက်စပ်ခံစား နေရကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ ရေကြီးမှု ဒဏ်ကို အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရပြီး ကျေးရွာ များရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃,၀၀၀ ခန့်မှာ ရေနစ်မြုပ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် လူဦး ရေ ၁၀,၀၀၀ ကျော်မှာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း များသို့ ရောက်ရှိနေသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ လည်း ရေကြီးမှုဒဏ်ကို နှစ်ကြိမ်ဆက်ခံစားခဲ့ ရပြီး လူဦးရေ ၅၆၁၃ ဦး ရှိသော အိမ်ထောင်စု ၁၃၅၇ ခုမှာ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွင်လည်း အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၅၀ မှာ ရေဘေးဒဏ် ကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း များတွင် နေ ထိုင်နေရသူ ၁၅,၀၀၁ ဦးထိသို့ ရောက်ရှိနေ သည်။
လက်ရှိတွင် ရေနစ်မြုပ်မှုဒဏ်ခံစားနေ ရသော လူဦးရေ ၃၀၀၀၀ကျော်ကို သက်ဆိုင် ရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများ ရှိ စာသင်ကျောင်း များ၊ ဘုန်ကြီးကျောင်း များ၌ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေး ထားကြောင်း လူမှုဝန် ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
သို့သော်သောက်သုံးရေ အခက်အခဲနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ရေကြီး ဒုက္ဓခံ စားနေရ သူများ၏ပြောကြား ချက်များအရ သိရသည်။
ယင်းကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ မှ စခန်းများတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းများနှင့် အစား အသောက် လိုအပ်ချက်များ အတွက် ဖြည့်ဆည်းရန် အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်နေပြီ ဟု ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှ သိရသည်။
"အခုရေဘေးဒုက္ဓသည်တွေကို သက် ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေရယ် မြို့ နယ် အထောက် အကူပြု အဖွဲ့တွေရယ် မီး သတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကြက်ခြေနီတွေက မြို့ လူထုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ရေလွတ်ရာ စာသင် ကျောင်းတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ပြောင်း ရွေ့ပေးပြီး လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ဆောင်ရွက်နေ ပါတယ်"ဟု လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြီးမှုဒဏ်ကို ယခုနှစ်အတွင်း အများ အပြားတွေ့ကြုံခံစား ခဲ့ရပြီး သြဂုတ် လဆန်း ပိုင်း တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သောရေကြီးမှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာအရလူဦးရေ ၅၀,၀၀၀ ခန့်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၆၇ ရပ်ကွက်ရှိ ကျူးကျော်များ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ လျှောက်ခွင့်ပေးရေးအတွက် ဆန္ဒပြ
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၆၇ ရပ်ကွက်ရှိ ကျူးကျော်များ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ လျှောက်ထားခွင့်အတွက် ဆန္ဒပြနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မျိုးမြင့်အောင်)
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ၆၇ ရပ်ကွက်ရှိ ကျူးကျော်ပြည်သူများက ၎င်းတို့အား ဖယ်ရှားခြင်း မပြုဘဲ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာ လျှောက်ခွင့်ပေးရေး အတွက် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမှတ် ၆၇ ရပ်ကွက်ရှိ လူအင်အား ၆၀ ခန့်မှ ၎င်းတို့အား မပြောင်းရွှေ့ရေးနှင့် အိုးအိမ်မှ ကတိပေး ထား သည့် အတိုင်း အိမ်ရာလျှောက်ခွင့် ပေးရန်အတွက် ပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်ပြီး ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော် ကာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
"ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေဟာ ပြောင်းရွှေ့ရမယ့် နေရာမှာ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို တင်ပြတာ ဖြစ်တယ်။ ၁ လပိုင်း ၂ ရက်က သူတို့ကနေ ကျွန်တော်တို့ကို ပေးထားတဲ့ ကတိကလစ် လပ်တဲ့ နေရာလေးတွေမှာ တဲတန်းလျားထိုးပြီး နေထိုင်ဖို့ လုပ်ပေးမယ်။ တိုက်ခန်းပြီးတာနဲ့ တိုက်ခန်းလျှောက်ခွင့် ပေးမယ်။ အလုပ်တွေလည်း ၀င်လုပ်ပါ။ လခပေးမယ်။ နေ့စားခ ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောထားတာ။ အဲဒီလို ပေးထားတဲ့ ကတိကို မတည်ဘဲနဲ့ မင်းတို့ပြောင်းတော့ဆိုပြီး နို့တစ်စာပေးတာ ငါးကြိမ်ရှိပြီ။ ၁ လပိုင်းတုန်းက အိုးအိမ်အပါအ၀င် ဌာန ၁၁ ခုက ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီး ကတိပေးခဲ့တာ" ဆန္ဒပြရာတွင် ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအေးကိုက ပြောကြားသည်။
ပြောင်းရွှေ့သူများအား ၁၀ ပေ၊ ပေ ၆၀ မြေကွက်အား တစ်နှစ်နေထိုင်ခွင့်နှင့် ကျပ်ငွေနှစ်သိန်းပေးကြောင်း သိရပြီး၊ ပြောင်းရွှေ့သွားသူများမှာ အိမ်ခြေ ၅၀ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
"ပြောင်းရမယ့် အိမ် ၄၀၀ ကျော်မှာ ကျန်နေတာက ၅၀ လောက်ပါ။ အဲဒီကျန်နေတဲ့ သူတွေက ၁၅ နှစ်၊ နှစ် ၂၀ နေလာတဲ့ သူဟောင်းတွေ ဖြစ်တယ်။ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဦးစားပေးစနစ်နဲ့ နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်၊ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာမှာ ဆင်းရဲသားတွေ နေနိုင်အောင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ အရစ်ကျဆိုလည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးစေချင်တယ်" ဟု ဦးအေးကိုက ပြောကြားသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ၆၇ ရပ်ကွက်တွင် မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစီးဌာနမှ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရတနာ၊ ဧရာဝဏ် အထပ်မြင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
Search Engine မှာ ကိုယ့်ဆိုဒ် ထိပ်ဆုံးပေါ်အောင် လုပ...
ကျွန်းစုမြို့၌ ဦးခေါင်းခွံနှင့် မျက်လုံးပေါက်မပါရှ...
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အတွင်းမှ လူမနေသည့် တိုက်ခန်းမျာ...
"မွတ်ဆလင်ကုလား၏ ကြံရည်တစ်ခွက်ကြောင့် ဘဝပျက်လုနီးပါ...
ရွာသားများနှင့် ရဲများ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့မှု ကြံ့ခိုင်ရေ...
"... လူပြောများနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ဆီဒိုးနား စုံစမ်...
ဆယ်နှစ်ကျော်က ကြွေးကျန်စာရင်း အခြေခံပညာ ဆရာများ ထံ...
နိုင်ငံခြားအရန်ငွေ ဒေါ်လာ ခုနစ်ဘီလီယံကျော် ထားရှိဟု...
ခင်ဗျားတို့ အယ်ဒီတာချုပ်တွေ၊ စီအီးအို ဆိုသူတွေ၊ တိ...
ဆိုက်ဘာ မှုခင်းများအား မြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် တိုင်ကြ...
ကလေးအလုပ်သမား ကိစ္စ ILO နှင့် သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆ...
သိသိကြီးနဲ့ မှားတဲ့အမှားတော့ "မိုး" ဘဝမှာ မရှိဘူးဆ...
မက်လုံးတွေ လေတွေကြားထဲကနေ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး ဖြစ...
ယာဉ် ကိုးစီးနှင့် ဆိုင်ကယ် တစ်စီးတို့ကို ဘရိတ်ပေါက...
အရက်တားမြစ်ထားသော နိုင်ငံမှ သူရာကျေးကျွန်များ – ကေ...
ဇာတ်မတူသည့် ချစ်သူစုံတွဲ လက်ထပ်ရန်စီစဉ်၍ မိန်းကလေး...
ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ အသွင်နဲ့ အင်္ဂလန်မှာ တာစားနေတဲ...
ဂျရတ်လက်သစ် လူငယ်လေးကို မာဆေးဆိုက်နှစ်သင်း အပြိုင်...
မော်ဒယ်ခင်လပြည့်ဇော် ရဲ့ လန်းချက်၉လောက်ရှိတဲ့ဓာတ်ပ...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၆၇ ရပ်ကွက်ရှိ ကျူးကျော်များ တ...